September 2016 | Language Century Language Century
5:53 AM C-Draw , Chinese
头 ဆိုတာ “ဦးခေါင်း” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အရမ်း မခက်တဲ့ စာလုံးလေးမို့ သင် အလွယ်တကူ လေ့ကျင့်ရေးသားနိုင်မှာပါ။
5:46 AM C-Draw , Chinese
လူတကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးပေါ့နော်။ သင်ရော ဘာလုပ်ရတာကို ကြိုက်ပါသလဲ။ “ကြိုက်သည်” ကို တရုတ်လို 喜လို့ ပြောပါတယ်။
5:37 AM C-Draw , Chinese
风 ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ရှူရှိုက်နေတဲ့ “လေ” ကို ခေါ်တာပါ။ စုတ်ချက် ၄-ချက်ပဲ ရှိပြီး ရေးရလွယ်ကူတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေး တစ်လုံးပေါ့။
5:19 AM C-Draw , Chinese
ဒီနေ့ လေ့လာရမယ့် တရုတ်စာလုံးလေးကတော့ 用 ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလို “အသုံးပြုသည်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
5:09 AM C-Draw , Chinese
“ကြည့်သည်” ကို တရုတ်လို 看 လို့ ပြောပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံးပုံစံတွေထဲမှာ အသုံးအများဆုံး စကားလုံးလေး တစ်ခုပါ။ ဆက်လက် လေ့ကျင့်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
5:06 AM C-Text , Chinese
ဂျပန်နိုင်ငံက ဒီပန်းဥယျာဉ်ကြီးဟာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကို ဖော်ကျူးနေပါတယ်။
在 日 本 ，有 一 个 非 常 大 非 常 漂 亮 的 花 园 ，花 园 里 面 的 花 都 是 黑 木 先 生 送 给 黑 木 太 太 的 礼 物 。
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အရမ်းကြီး၊ အရမ်းလှတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခု ရှိပါတယ်၊ ပန်းဥယျာဉ်ထဲက ပန်းတွေအားလုံးဟာ Mr.Kurogi က Mrs.Kurogi အတွက် ပေးထားတဲ့ လက်ဆောင်တွေပါ။
黑 木 先 生 和 黑 木 太 太 结 婚 后 生 活 得 非 常 幸 福 ，但 是 黑 木 太 太 因 为 生 病 ，眼 睛 看 不 见 了 。
Mr.Kurogi နဲ့ Mrs.Kurogi တို့ လက်ထပ်ကြပြီးနောက် ဘဝတွေက အရမ်းကို သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Mrs.Kurogi ဟာ နေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက် မျက်စိကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
从 那 以 后 ，她 就 不 愿 意 出 门 了 。
အဲဒီအချိန်ကစလို့ သူမဟာ အပြင်ကို ထွက်ဖို့ ဆန္ဒမရှိတော့ဘူး။
黑 木 先 生 为 了 让 黑 木 太 太 开 心 ，让 她 出 门 走 走 ，他 想 到 了 一 个 浪 漫 的 办 法 ：建 一 个 花 园 。
Mr.Kurogi ဟာ Mrs.Kurogi ကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်၊ သူမကို အပြင်ထွက်ပြီး လမ်းလျှောက်စေချင်တာမို့၊ သူဟာ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်းကြယ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို စဉ်းစားမိပြီး၊ ပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါတော့တယ်။
经 过 两 年 的 时 间 ，花 园 建 好 了 。
နှစ်နှစ်တာကာလကို ဖြတ်သန်းပြီးချိန်မှာတော့၊ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးဟာ တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပါတော့တယ်။
黑 木 太 太 虽 然 看 不 见 ，但 是 她 能 闻 到 花 的 香 味 。
Mrs.Kurogi ဟာ မမြင်တွေ့ရပေမယ့်လည်း၊ ပန်းတွေရဲ့ မွှေးရနံ့ကို သူမ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
从 那 以 后 ，黑 木 太 太 特 别 喜 欢 坐 在 花 园 里 ，黑 木 太 太 说 ：“ 能 闻 到 花 的 香 味 ，很 幸 福 。”
အဲဒီအချိန်ကစလို့ Mrs.Kurogi ဟာ ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာ ထိုင်ရတာကို အရမ်း သဘောကျသွားတယ်၊ " ပန်းတွေရဲ့ မွှေးရနံ့ကို ရှူရှိုက်ရတာ အရမ်းကို ကြည်နူးချမ်းမြေ့ရပါတယ် " လို့ Mrs.Kurogi က ပြောပါတယ်။
现 在 这 个 花 园 已 经 成 了 一 个 旅 游 景 点 ，很 多 人 都 喜 欢 去 那 里 ，看 一 看 花 ，听 一 听 黑 木 先 生 和 黑 木 太 太 浪 漫 的 爱 情 故 事 。
အခုတော့ ဒီပန်းဥယျာဉ်ကြီးဟာ လည်ပတ်ကြည့်ရှုစရာ နေရာကောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ၊ လူအများစုက အဲဒီကို သွားရတာ သဘောကျကြတယ်၊ ပန်းတွေကို ကြည့်ရင်း၊ Mr.Kurogi နဲ့ Mrs.Kurogi တို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်းကြယ်တဲ့ အချစ်ပုံပြင်တွေကို နားထောင်ကြတာပေါ့။
1. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်
4. 一个〔yíge〕တစ်ခု။ တစ်ယောက်
8. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
13. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
14. 黑木〔Hēimù〕Kurogi ( ဂျပန်အမည် )
17. 给〔gěi〕 ပေးသည်
18. 太太〔tàitai〕ကတော်။ မဒမ်
20. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
22. 后〔hòu〕 ပြီးနောက်
23. 生活〔shēnghuó〕 နေထိုင်သည်။ နေထိုင်မှုဘဝ
24. 得〔de〕... တာ
30. 看见〔kànjiàn〕 တွေ့ရသည်
31. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
32. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
33. 从〔cóng〕... မှ။ က
34. 那〔nà〕အဲဒါ။ အဲဒီ
35. 以后〔yǐhòu〕... ပြီးနောက်
40. 为了〔wèile〕... အတွက်
41. 让〔ràng〕... စေသည်
43. 走〔zǒu〕သွားသည်။ လမ်းလျှောက်သည်
46. 浪漫〔làngmàn〕စိတ်ကူးယဉ်၍ ဆန်းကျယ်သည်။ romantic
49. 经过〔jīngguò〕 ဖြတ်ကျော်သည်
50. 两年〔liǎngnián〕 နှစ်နှစ်ကြာ
51. 时间〔shíjiān〕အချိန်။ ကာလ
53. 虽然〔suīrán〕... ပေမယ့်လည်း
54. 能〔néng〕... နိုင်သည်
61. 说〔shuō〕 ပြောသည်
64. 这个〔zhège〕ဒါ။ ဒီဟာ
65. 已经〔yǐjīng〕... ပြီးနှင့်ပြီ
66. 成〔chéng〕 ဖြစ်သည်
68. 景点〔jǐngdiǎn〕အကွက်အကွင်း။ အခန်းကဏ္ဍ
75. 爱情〔ài qíng〕အချစ်။ ချစ်မေတ္တာ
ဂပြနျနိုငျငံက ဒီပနျးဥယြာဉျကွီးဟာ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးရဲ့ စိတျကူးယဉျဆနျးကွယျလှနျးတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတရားတှကေို ဖျောကြူးနပေါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံမှာ အရမျးကွီး၊ အရမျးလှတဲ့ ပနျးဥယြာဉျကွီးတဈခု ရှိပါတယျ၊ ပနျးဥယြာဉျထဲက ပနျးတှအေားလုံးဟာ Mr.Kurogi က Mrs.Kurogi အတှကျ ပေးထားတဲ့ လကျဆောငျတှပေါ။
Mr.Kurogi နဲ့ Mrs.Kurogi တို့ လကျထပျကွပွီးနောကျ ဘဝတှကေ အရမျးကို သာယာပြျောရှငျဖှယျကောငျးကွပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ Mrs.Kurogi ဟာ နမေကောငျးဖွဈပွီးနောကျ မကျြစိကှယျသှားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအခြိနျကစလို့ သူမဟာ အပွငျကို ထှကျဖို့ ဆန်ဒမရှိတော့ဘူး။
Mr.Kurogi ဟာ Mrs.Kurogi ကို စိတျပြျောရှငျစခေငျြတယျ၊ သူမကို အပွငျထှကျပွီး လမျးလြှောကျစခေငျြတာမို့၊ သူဟာ စိတျကူးယဉျ ဆနျးကွယျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုကို စဉျးစားမိပွီး၊ ပနျးဥယြာဉျတဈခုကို တညျဆောကျပါတော့တယျ။
နှဈနှဈတာကာလကို ဖွတျသနျးပွီးခြိနျမှာတော့၊ ပနျးဥယြာဉျကွီးဟာ တညျဆောကျပွီးစီးသှားပါတော့တယျ။
Mrs.Kurogi ဟာ မမွငျတှရေ့ပမေယျ့လညျး၊ ပနျးတှရေဲ့ မှေးရနံ့ကို သူမ ရရှိနိုငျပါတယျ။
အဲဒီအခြိနျကစလို့ Mrs.Kurogi ဟာ ပနျးဥယြာဉျထဲမှာ ထိုငျရတာကို အရမျး သဘောကသြှားတယျ၊ " ပနျးတှရေဲ့ မှေးရနံ့ကို ရှူရှိုကျရတာ အရမျးကို ကွညျနူးခမျြးမွရေ့ပါတယျ " လို့ Mrs.Kurogi က ပွောပါတယျ။
အခုတော့ ဒီပနျးဥယြာဉျကွီးဟာ လညျပတျကွညျ့ရှုစရာ နရောကောငျးတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါပွီ၊ လူအမြားစုက အဲဒီကို သှားရတာ သဘောကကြွတယျ၊ ပနျးတှကေို ကွညျ့ရငျး၊ Mr.Kurogi နဲ့ Mrs.Kurogi တို့ရဲ့ စိတျကူးယဉျ ဆနျးကွယျတဲ့ အခဈြပုံပွငျတှကေို နားထောငျကွတာပေါ့။
1. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသညျ
4. 一个〔yíge〕တဈခု။ တဈယောကျ
8. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
13. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
14. 黑木〔Hēimù〕Kurogi ( ဂပြနျအမညျ )
17. 给〔gěi〕 ပေးသညျ
18. 太太〔tàitai〕ကတျော။ မဒမျ
20. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
22. 后〔hòu〕 ပွီးနောကျ
23. 生活〔shēnghuó〕 နထေိုငျသညျ။ နထေိုငျမှုဘဝ
30. 看见〔kànjiàn〕 တှရေ့သညျ
31. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
32. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
33. 从〔cóng〕... မှ။ က
35. 以后〔yǐhòu〕... ပွီးနောကျ
40. 为了〔wèile〕... အတှကျ
41. 让〔ràng〕... စသေညျ
43. 走〔zǒu〕သှားသညျ။ လမျးလြှောကျသညျ
46. 浪漫〔làngmàn〕စိတျကူးယဉျ၍ ဆနျးကယျြသညျ။ romantic
49. 经过〔jīngguò〕 ဖွတျကြျောသညျ
50. 两年〔liǎngnián〕 နှဈနှဈကွာ
51. 时间〔shíjiān〕အခြိနျ။ ကာလ
53. 虽然〔suīrán〕... ပမေယျ့လညျး
54. 能〔néng〕... နိုငျသညျ
61. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
65. 已经〔yǐjīng〕... ပွီးနှငျ့ပွီ
66. 成〔chéng〕 ဖွဈသညျ
68. 景点〔jǐngdiǎn〕အကှကျအကှငျး။ အခနျးကဏ်ဍ
75. 爱情〔ài qíng〕အခဈြ။ ခဈြမတ်ေတာ
တရုတ်ပြည်မှာ ရထားစီးတဲ့အခါ တရုတ်လူမျိုးတွေ ဘာလုပ်လေ့ရှိကြပါသလဲ။ သင် တရုတ်ပြည် သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါတွေကို လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
在 中 国 ，坐 火 车 的 人 很 多 ，在 火 车 上 的 时 间 有 长 有 短 ，长 的 有 40 多 个 小 时 ，短 的 只 要 十 分 钟 。
တရုတ်ပြည်မှာ ရထားစီးတဲ့လူ အရမ်းများတယ်၊ ရထားပေါ်မှာ အချိန်ကြာတာ ရှိသလို၊ အချိန်တိုတာလည်း ရှိပါတယ်၊ ( ရထားခရီးစဉ်တစ်ခုက ) ကြာမယ်ဆိုရင် နာရီပေါင်း ၄၀ ကျော်လောက်ကြာပြီး၊ တိုရင် ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲ ကြာပါတယ်။
可 是 不 管 时 间 长 短 ，中 国 人 都 会 带 一 些 吃 的 、喝 的 和 玩 的 ，其 中 就 有 凤 爪 、瓜 子 、方 便 面 、饮 料 、啤 酒 、 白 酒 和 扑 克 牌 ，也 可 以 在 火 车 上 买 这 些 东 西 。
ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာသည်ဖြစ်စေ၊ တိုသည်ဖြစ်စေ၊ တရုတ်လူမျိုးတွေက စားစရာ၊ သောက်စရာနဲ့ ကစားစရာတချို့ကို တပါတည်း ယူဆောင်သွားကြတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာ ကြက်ခြေထောက်၊ ကွာစိ၊ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲ၊ အအေး၊ ဘီယာ၊ အရက်ဖြူနဲ့ ဖဲထုပ်တွေ ပါတာပေါ့၊ အဲဒီပစ္စည်းတွေကို ရထားပေါ်မှာ ဝယ်လို့လည်း ရပါတယ်။
他 们 不 但 自 己 吃 喝 玩 乐 ，也 邀 请 旁 边 的 陌 生 人 一 起 。
သူတို့က မိမိဘာသာ စားသောက်ဆော့ကစားကြရုံသာမက၊ ဘေးက လူစိမ်းတွေကိုပါ တပါတည်း ပါဝင်ခိုင်းပါတယ်။
中 国 人 觉 得 这 样 既 欢 乐 又 可 以 消 磨 时 间 ，但 是 很 多 外 国 人 都 觉 得 太 吵 了 。
ဒီလိုလုပ်တာဟာ ပျော်ရွှင်စေရုံသာမက အချိန်တွေကိုလည်း ကုန်ဆုံးစေတယ်လို့ တရုတ်လူမျိုးတွေက မှတ်ယူကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ အရမ်း ဆူညံတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
所 以 如 果 你 不 习 惯 ，可 以 在 火 车 上 听 音 乐 或 者 看 电 视 。
ဒါကြောင့်မို့ တကယ်လို့ သင် အလေ့အကျင့် မရှိဘူးဆိုရင်၊ ရထားပေါ်မှာ သီချင်းနားထောင်လို့ ဒါမှမဟုတ် တီဗီကြည့်လို့ရပါတယ်။
1. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
3. 坐〔zuò〕စီးသည်။ ထိုင်သည်
5. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
9. 上〔shàng〕အပေါ်။ တက်သည်
14. 个〔ge〕... ခု။ ယောက်
16. 只〔zhǐ〕... သာလျှင်။ ပဲ
17. 要〔yào〕... မယ်။ လိုသည်။ ယူသည်
23. 会〔huì〕... လိမ့်မယ်။ တတ်သည်
27. 喝的〔hēde〕 သောက်စရာ
28. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
29. 玩的〔wánde〕 ဆော့စရာ
31. 就〔jiù〕ပဲ။ ပဲပေါ့
39. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
40. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်။ လို့ရသည်
42. 这些〔zhèxiē〕ဒါတွေ။ ဒီဟာတွေ
45. 不但〔búdàn〕... သာမက
46. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
47. 吃喝玩乐〔chī hē wán lè〕စားသောက်ပျော်ပါးခြင်း
49. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘက်
54. 既...又〔jì...yòu〕... သာမက... လည်းပဲ
56. 消磨〔xiāomó〕အလဟဿ ကုန်လွန်စေသည်
58. 外国人〔wàiguórén〕 နိုင်ငံခြားသား
59. 太...了〔tài.. le〕သိပ် ... လွန်းတယ်
63. 你〔nǐ〕သင်။ မင်း။ ခင်ဗျား
64. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
65. 习惯〔xíguàn〕ကျင့်သားရသည်။ နေသားကျသည်
ရထားပျေါမှာ ဘယျလို အခြိနျဖွုနျးမလဲ။
တရုတျပွညျမှာ ရထားစီးတဲ့အခါ တရုတျလူမြိုးတှေ ဘာလုပျလရှေိ့ကွပါသလဲ။ သငျ တရုတျပွညျ သှားမယျဆိုရငျတော့ ဒါတှကေို လလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။
တရုတျပွညျမှာ ရထားစီးတဲ့လူ အရမျးမြားတယျ၊ ရထားပျေါမှာ အခြိနျကွာတာ ရှိသလို၊ အခြိနျတိုတာလညျး ရှိပါတယျ၊ ( ရထားခရီးစဉျတဈခုက ) ကွာမယျဆိုရငျ နာရီပေါငျး ၄၀ ကြျောလောကျကွာပွီး၊ တိုရငျ ဆယျမိနဈလောကျပဲ ကွာပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခြိနျကွာသညျဖွဈစေ၊ တိုသညျဖွဈစေ၊ တရုတျလူမြိုးတှကေ စားစရာ၊ သောကျစရာနဲ့ ကစားစရာတခြို့ကို တပါတညျး ယူဆောငျသှားကွတယျ၊ အဲဒီအထဲမှာ ကွကျခွထေောကျ၊ ကှာစိ၊ အသငျ့စား ခေါကျဆှဲ၊ အအေး၊ ဘီယာ၊ အရကျဖွူနဲ့ ဖဲထုပျတှေ ပါတာပေါ့၊ အဲဒီပစ်စညျးတှကေို ရထားပျေါမှာ ဝယျလို့လညျး ရပါတယျ။
သူတို့က မိမိဘာသာ စားသောကျဆော့ကစားကွရုံသာမက၊ ဘေးက လူစိမျးတှကေိုပါ တပါတညျး ပါဝငျခိုငျးပါတယျ။
ဒီလိုလုပျတာဟာ ပြျောရှငျစရေုံသာမက အခြိနျတှကေိုလညျး ကုနျဆုံးစတေယျလို့ တရုတျလူမြိုးတှကေ မှတျယူကွပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံခွားသားတှကေတော့ အရမျး ဆူညံတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ တကယျလို့ သငျ အလအေ့ကငျြ့ မရှိဘူးဆိုရငျ၊ ရထားပျေါမှာ သီခငျြးနားထောငျလို့ ဒါမှမဟုတျ တီဗီကွညျ့လို့ရပါတယျ။
1. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
3. 坐〔zuò〕စီးသညျ။ ထိုငျသညျ
5. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
9. 上〔shàng〕အပျေါ။ တကျသညျ
14. 个〔ge〕... ခု။ ယောကျ
16. 只〔zhǐ〕... သာလြှငျ။ ပဲ
17. 要〔yào〕... မယျ။ လိုသညျ။ ယူသညျ
23. 会〔huì〕... လိမျ့မယျ။ တတျသညျ
27. 喝的〔hēde〕 သောကျစရာ
28. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
29. 玩的〔wánde〕 ဆော့စရာ
31. 就〔jiù〕ပဲ။ ပဲပေါ့
39. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
40. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ။ လို့ရသညျ
42. 这些〔zhèxiē〕ဒါတှေ။ ဒီဟာတှေ
46. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
47. 吃喝玩乐〔chī hē wán lè〕စားသောကျပြျောပါးခွငျး
49. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘကျ
54. 既...又〔jì...yòu〕... သာမက... လညျးပဲ
56. 消磨〔xiāomó〕အလဟဿ ကုနျလှနျစသေညျ
58. 外国人〔wàiguórén〕 နိုငျငံခွားသား
59. 太...了〔tài.. le〕သိပျ ... လှနျးတယျ
63. 你〔nǐ〕သငျ။ မငျး။ ခငျဗြား
64. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
65. 习惯〔xíguàn〕ကငျြ့သားရသညျ။ နသေားကသြညျ
4:45 AM C-Text , Chinese
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူဆုံပြီး စားသောက်ကြတဲ့အခါ၊ မိမိမှာစားသလောက်ကို မိမိရှင်းတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်တစ်လှည့် ရှင်းကြပါသလား။
不 知 道 你 在 中 国 有 没 有 看 到 过 这 样 的 场 景 ：在 饭 店 的 收 银 台 前 ，两 个 人 都 拿 着 钱 或 者 银 行 卡 ，抢 着 买 单 ？
တရုတ်ပြည်မှာ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို သင် မြင်ဖူးလားတော့ မသိဘူး၊ ဟော်တယ်က ငွေရှင်းကောင်တာမှာ လူနှစ်ယောက်ဟာ ပိုက်ဆံ ဒါမှမဟုတ် ဘဏ်ကဒ်ကို အပြန်အလှန် လုယူပြီး ငွေရှင်းနေကြတာမျိုးကိုပေါ့။
也 许 你 会 觉 得 很 奇 怪 ， 怎 么 中 国 人 那 么 大 方 ，都 爱 请 人 吃 饭 ，为 什 么 不 AA 制 呢 ？
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ရက်ရောနေတာလဲလို့ ထူးဆန်းနေသလိုမျိုး သင် ထင်မိကောင်း ထင်မိလိမ့်မယ်၊ သူများကို ကျွေးရတာတော့ သဘောကျပြီး၊ ဘာကြောင့် ကိုယ်စားတာ ကိုယ်မရှင်းကြတာလဲပေါ့။
其 实 ，这 不 是 大 方 ，应 该 算 是 一 种 “ 中 国 特 色 ” 吧 。
အမှန်တော့ ဒါဟာ ရက်ရောတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ " တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဝိသေသ " တစ်မျိုးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
中 国 人 喜 欢 礼 尚 往 来 ，很 多 人 都 觉 得 这 次 我 买 单 了 ，下 次 自 然 就 该 轮 到 他 请 客 了 。
တရုတ်လူမျိုးတွေက အပြန်အလှန် ပေးကမ်းရတာကို သဘောကျတယ်၊ အများစု ယူဆထားတာက ဒီတစ်ကြိမ် ငါရှင်းမယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ်က မင်းရှင်းရမယ့် အလှည့်ပဲဆိုတာ အလိုလိုသိကြတယ်။
这 样 一 来 一 往 ，一 段 时 间 下 来 ，也 基 本 上 算 是 AA 制 了 。
ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာ ဒီလို အပြန်အလှန်ရှင်းကြတာဟာလည်း အခြေခံအားဖြင့်တော့ ကိုယ်စားတာ ကိုယ်ရှင်းတဲ့ စနစ်ပါပဲ။
当 然 也 有 些 人 觉 得 不 抢 着 买 单 会 很 没 面 子 ，别 人 会 认 为 他 很 小 气 。
ဘီလ်ကို လုမရှင်းကြတာဟာ မျက်နှာပျက်စရာလို့ တရုတ်လူမျိုး အများစုက ယူဆကြတယ်၊ သူဟာ အရမ်း တွန့်တိုတယ်လို့ တဖက်သားက ယူဆသွားလိမ့်မယ်။
特 别 是 约 会 的 时 候 ，基 本 上 都 是 男人 买 单 ，如 果 男 人 让 女 人 买 单 的 话 ，很 多 人 会 觉 得 这 个 男 人 小 气 ，没 用 。
အထူးသဖြင့် ချိန်းကြတဲ့အခါမှာပေါ့၊ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ယောင်္ကျားလေးက ငွေရှင်းကြရတယ်၊ တကယ်လို့ ယောင်္ကျားလေးက မိန်းကလေးကို ငွေရှင်းခိုင်းတယ်ဆိုရင်၊ ဒီယောင်္ကျားလေးဟာ အရမ်း တွန့်တိုတယ်၊ အသုံးမကျဘူးလို့ အများစုက ယူဆကြလိမ့်မယ်၊
但 是 现 在 也 有 一 些 年 轻 人 喜 欢 AA 制 ，他 们 觉 得 这 样 自 己 想 点 什 么 就 点 什 么 ，不 用 担 心 是 别 人 请 客 ，而 不 敢 点 贵 的 东 西 吃 ，比 较 自 由 。
ဒါပေမယ့် အခုတော့ လူငယ်တွေဟာ ကိုယ်စား ကိုယ်ရှင်းစနစ်ကို သဘောကျလာကြပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိမှာချင်တာကို မှာလို့ရတယ်လို့ သူတို့က ယူဆကြတယ်၊ ဈေးကြီးတဲ့ အစားအစာကို မှာမစားရဲတာတို့၊ တခြားသူ ကျွေးမွေးဧည့်ခံတဲ့အပေါ်မှာ စိုးရိမ်နေစရာ မလိုတော့ဘူး၊ ပိုပြီးတော့ ( စိတ် )လွတ်လပ်ပါတယ်။
1. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
3. 你〔nǐ〕မင်း။ နင်။ ခင်ဗျား
4. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
8. 看到〔kàndào〕 တွေ့ရသည်
9. 过〔guo〕... ဖူးသည်
11. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
12. 场景〔chǎngjǐng〕 မြင်ကွင်း။ အခြေအနေ
13. 饭店〔fàndiàn〕 ဟော်တယ်။ ထမင်းဆိုင်
14. 收银台〔shōuyíntái〕 ငွေရှင်းကောင်တာ
15. 前〔qián〕 ရှေ့
16. 两个〔liǎngge〕 နှစ်ယောက်။ နှစ်ခု
18. 都〔dōu〕အားလုံး။ တောင်မှ
20. 着〔zhe〕... လျှက်။ နေတုန်း။ နေဆဲ
21. 钱〔qián〕 ငွေ။ ပိုက်ဆံ
25. 买单〔mǎidān〕 ငွေရှင်းသည်
26. 也许〔yěxǔ〕 ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်
27. 会〔huì〕... လိမ့်မယ်။ တတ်သည်
33. 那么〔nàme〕ဒီလောက်။ ဟိုလို
35. 爱〔ài〕ချစ်သည်။ ကြိုက်သည်
36. 请〔qǐng〕ဖိတ်သည်။ ပင့်သည်
40. AA制〔AA zhì〕ကိုယ်စား ကိုယ်ရှင်း စနစ်
42. 其实〔qíshí〕အမှန်တော့။ တကယ်တော့
43. 这〔zhè〕ဒါ။ ဒီဟာ
44. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
45. 应该〔yīnggāi〕... သင့်သည်
48. 特色〔tèsè〕ထူးခြားချက်။ ဝိသေသလက္ခဏာ
51. 礼尚往来〔lǐ shàng wǎng lái〕အပြန်အလှန်ပေးကမ်းခြင်း
54. 下次〔xiàcì〕 နောက်တစ်ကြိမ်
55. 自然〔zìrán〕သဘာဝ။ အလိုလို
57. 该〔gāi〕... သင့်သည်
60. 请客〔qǐngkè〕 ပြုစုဧည့်ခံသည်
62. 一来一往〔yì lái yì wǎng〕အပြန်အလှန်
65. 下来〔xiàlái〕ဆင်းလာသည်။ ... သွားသည်
66. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
68. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
70. 没〔méi〕မ ... ခဲ့
71. 面子〔miànzi〕မျက်နှာ။ မျက်နှာထောက်ထားမှု
73. 认为〔rènwéi〕ထင်မှတ်သည်။ ယူဆသည်
77. 的时候〔de shíhòu〕... တဲ့အခါ
78. 男人〔nánrén〕 ယောင်္ကျားလေး
80. 让〔ràng〕... စေသည်
82. 的话〔dehuà〕... လျှင်
83. 这个〔zhège〕ဒါ။ ဒီဟာ
90. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
91. 想〔xiǎng〕ထင်သည်။ ချင်သည်
94. 不用〔búyòng〕... ဖို့မလိုပါ
96. 而〔ér〕 ပြီးနောက်
97. 敢〔gǎn〕... ရဲသည်
98. 贵〔guì〕 ဈေးကြီးသော
101. 自由〔zìyóu〕လွတ်လပ်မှု။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်
မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူဆုံပွီး စားသောကျကွတဲ့အခါ၊ မိမိမှာစားသလောကျကို မိမိရှငျးတာလား၊ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျတဈလှညျ့ ရှငျးကွပါသလား။
တရုတျပွညျမှာ ဒီလိုမွငျကှငျးမြိုးကို သငျ မွငျဖူးလားတော့ မသိဘူး၊ ဟျောတယျက ငှရှေငျးကောငျတာမှာ လူနှဈယောကျဟာ ပိုကျဆံ ဒါမှမဟုတျ ဘဏျကဒျကို အပွနျအလှနျ လုယူပွီး ငှရှေငျးနကွေတာမြိုးကိုပေါ့။
တရုတျလူမြိုးတှဟော ဘာလို့ ဒီလောကျတောငျ ရကျရောနတောလဲလို့ ထူးဆနျးနသေလိုမြိုး သငျ ထငျမိကောငျး ထငျမိလိမျ့မယျ၊ သူမြားကို ကြှေးရတာတော့ သဘောကပြွီး၊ ဘာကွောငျ့ ကိုယျစားတာ ကိုယျမရှငျးကွတာလဲပေါ့။
အမှနျတော့ ဒါဟာ ရကျရောတာ မဟုတျပါဘူး၊ " တရုတျပွညျရဲ့ ဝိသသေ " တဈမြိုးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
တရုတျလူမြိုးတှကေ အပွနျအလှနျ ပေးကမျးရတာကို သဘောကတြယျ၊ အမြားစု ယူဆထားတာက ဒီတဈကွိမျ ငါရှငျးမယျ၊ နောကျတဈကွိမျက မငျးရှငျးရမယျ့ အလှညျ့ပဲဆိုတာ အလိုလိုသိကွတယျ။
ဒီအခြိနျလေးအတှငျးမှာ ဒီလို အပွနျအလှနျရှငျးကွတာဟာလညျး အခွခေံအားဖွငျ့တော့ ကိုယျစားတာ ကိုယျရှငျးတဲ့ စနဈပါပဲ။
ဘီလျကို လုမရှငျးကွတာဟာ မကျြနှာပကျြစရာလို့ တရုတျလူမြိုး အမြားစုက ယူဆကွတယျ၊ သူဟာ အရမျး တှနျ့တိုတယျလို့ တဖကျသားက ယူဆသှားလိမျ့မယျ။
အထူးသဖွငျ့ ခြိနျးကွတဲ့အခါမှာပေါ့၊ အခွခေံအားဖွငျ့တော့ ယောကငြ်္ားလေးက ငှရှေငျးကွရတယျ၊ တကယျလို့ ယောကငြ်္ားလေးက မိနျးကလေးကို ငှရှေငျးခိုငျးတယျဆိုရငျ၊ ဒီယောကငြ်္ားလေးဟာ အရမျး တှနျ့တိုတယျ၊ အသုံးမကဘြူးလို့ အမြားစုက ယူဆကွလိမျ့မယျ၊
ဒါပမေယျ့ အခုတော့ လူငယျတှဟော ကိုယျစား ကိုယျရှငျးစနဈကို သဘောကလြာကွပါတယျ၊ ဒီလိုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ မိမိမှာခငျြတာကို မှာလို့ရတယျလို့ သူတို့က ယူဆကွတယျ၊ ဈေးကွီးတဲ့ အစားအစာကို မှာမစားရဲတာတို့၊ တခွားသူ ကြှေးမှေးဧညျ့ခံတဲ့အပျေါမှာ စိုးရိမျနစေရာ မလိုတော့ဘူး၊ ပိုပွီးတော့ ( စိတျ )လှတျလပျပါတယျ။
1. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
3. 你〔nǐ〕မငျး။ နငျ။ ခငျဗြား
4. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
8. 看到〔kàndào〕 တှရေ့သညျ
9. 过〔guo〕... ဖူးသညျ
11. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
12. 场景〔chǎngjǐng〕 မွငျကှငျး။ အခွအေနေ
13. 饭店〔fàndiàn〕 ဟျောတယျ။ ထမငျးဆိုငျ
14. 收银台〔shōuyíntái〕 ငှရှေငျးကောငျတာ
15. 前〔qián〕 ရှေ့
16. 两个〔liǎngge〕 နှဈယောကျ။ နှဈခု
18. 都〔dōu〕အားလုံး။ တောငျမှ
20. 着〔zhe〕... လြှကျ။ နတေုနျး။ နဆေဲ
21. 钱〔qián〕 ငှေ။ ပိုကျဆံ
25. 买单〔mǎidān〕 ငှရှေငျးသညျ
26. 也许〔yěxǔ〕 ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျသညျ
27. 会〔huì〕... လိမျ့မယျ။ တတျသညျ
33. 那么〔nàme〕ဒီလောကျ။ ဟိုလို
35. 爱〔ài〕ခဈြသညျ။ ကွိုကျသညျ
36. 请〔qǐng〕ဖိတျသညျ။ ပငျ့သညျ
40. AA制〔AA zhì〕ကိုယျစား ကိုယျရှငျး စနဈ
42. 其实〔qíshí〕အမှနျတော့။ တကယျတော့
44. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
45. 应该〔yīnggāi〕... သငျ့သညျ
48. 特色〔tèsè〕ထူးခွားခကျြ။ ဝိသသေလက်ခဏာ
51. 礼尚往来〔lǐ shàng wǎng lái〕အပွနျအလှနျပေးကမျးခွငျး
54. 下次〔xiàcì〕 နောကျတဈကွိမျ
57. 该〔gāi〕... သငျ့သညျ
60. 请客〔qǐngkè〕 ပွုစုဧညျ့ခံသညျ
62. 一来一往〔yì lái yì wǎng〕အပွနျအလှနျ
65. 下来〔xiàlái〕ဆငျးလာသညျ။ ... သှားသညျ
66. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
68. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
71. 面子〔miànzi〕မကျြနှာ။ မကျြနှာထောကျထားမှု
73. 认为〔rènwéi〕ထငျမှတျသညျ။ ယူဆသညျ
78. 男人〔nánrén〕 ယောကငြ်္ားလေး
80. 让〔ràng〕... စသေညျ
82. 的话〔dehuà〕... လြှငျ
90. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
91. 想〔xiǎng〕ထငျသညျ။ ခငျြသညျ
94. 不用〔búyòng〕... ဖို့မလိုပါ
96. 而〔ér〕 ပွီးနောကျ
97. 敢〔gǎn〕... ရဲသညျ
98. 贵〔guì〕 ဈေးကွီးသော
101. 自由〔zìyóu〕လှတျလပျမှု။ လှတျလှတျလပျလပျ
4:25 AM C-Text , Chinese
သင် ကြက်သွန်ဖြူစားရတာ ကြိုက်ပါသလား။ တရုတ်ပြည် မြောက်ပိုင်းသားတွေကတော့ အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြက်သွန်ဖြူဈေးတွေက အဆမတန်တက်နေတော့လည်း .....
蒜你狠 suàn nǐ hěn
“ 蒜 你 狠 ” 是 什 么 ？
蒜你狠 suàn nǐ hěn ဆိုတာ ဘာလဲ။
它 其 实 应 该 写 作 “ 算 你 狠 ” ，意 思 是 “ 好 吧 ，你 赢 了 ” 。
အမှန်က အဲဒါ 算你狠 suàn nǐ hěn လို့ ရေးရမှာပါ၊ အဓိပ္ပာယ်က " ကောင်းပြီ၊ မင်း နိုင်ပါတယ် " ပေါ့။
[ 蒜你狠 နဲ့ 算你狠 တရုတ်စာလုံး မတူတာ သတိပြု ]
我 们 可 以 有 在 这 样 的 场 合 ，比 如 你 女 朋 友 给 你 戴 了 绿 帽 子 ，你 很 生 气 ，却 又 没 有 办 法 ，所 以 你 只 能 对 她 说 ：“ 算 你 狠 ！”
ကျွန်တော်တို့က ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ရှိနိုင်တယ်၊ ဥပမာ ခင်ဗျားရဲ့ girl friend က ခင်ဗျားကို လှည့်စားသွားတော့ ခင်ဗျား အရမ်း ဒေါသထွက်တယ်၊ ဘာမှလည်း မတတ်နိုင်ဘူး၊ ဒီတော့ ခင်ဗျားက " 算你狠 suàn nǐ hěn နင် အရမ်း ရက်စက်တယ်ဟာ " လို့ပဲ ပြောလို့ရမယ်။
那 为 什 么 “ 算 你 狠 ” 会 变 成 “ 蒜 你 狠 ” 呢 ？
ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် 算你狠 suàn nǐ hěn က 蒜你狠 suàn nǐ hěn လို့ ပြောင်းသွားရတာလဲ။
这 个 和 大 蒜 有 关 系 。
ဒါက ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။
最 近 ，中 国 各 地 大 蒜 的 价 格 涨 得 非 常 厉 害 。
အခု တရုတ်ပြည်ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ကြက်သွန်ဖြူ ဈေးနှုန်းတွေက ဆိုးဆိုးရွားရွား မြင့်တက်နေပါတယ်။
去 年7月 大 蒜 的 批 发 价 格 是 每 斤 2.5 元 ，但 是 现 在 已 经 涨 到 了 每 斤 6.7 元 。
မနှစ်က ဇူလိုင်လမှာ ကြက်သွန်ဖြူ လက်ကားဈေးက တစ်ကီလိုကို ၂.၅ ယွမ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် အခု တစ်ကီလိုကို ၆.၇ ယွမ်အထိ ဈေးတက်သွားပါပြီ။
特 别 是 山 东 ，目 前 大 蒜 的 价 格 已 经 达 到 了 20 元 一 斤 ，所 以 以 前 我 们 去 小 店 吃 饭 ，都 会 有 免 费 的 大 蒜 吃 ，现 在 ，无 论 是 吃 包 子 还 是 吃 饺 子 ，都 没 有 免 费 的 大 蒜 吃 了 。
အထူးသဖြင့်တော့ Shandong ပြည်နယ်ပေါ့၊ လက်ရှိမှာ ကြက်သွန်ဖြူဈေးက တစ်ကီလိုကို ၂၀ ယွမ်အထိ ရောက်နေပါပြီ၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အရင်က ဆိုင်ကလေးတွေမှာ ထမင်းသွားစားရင် ကြက်သွန်ဖြူကို အလကားစားလို့ရပါတယ်၊ အခု ပေါက်စီပဲစားစား၊ ဖက်ထုပ်ပဲစားစား ကြက်သွန်ဖြူ အလကားစားလို့ မရတော့ဘူး။
这 个 对 于 爱 吃 大 蒜 的 北 方 人 来 说 可 不 是 一 件 好 事 情 ，他 们 想 吃 大 蒜 ，却 因 为 太 贵 不 能 天 天 吃 ，再 加 上 “ 算 你 狠 ” 的 “ 算 ” 和 “ 大 蒜 ” 的 “ 蒜 ” 同 音 ，所 以 很 多 人 都 说 ：“ 蒜 你 狠 ！”
ကြက်သွန်ဖြူ အရမ်းကြိုက်တဲ့ မြောက်ပိုင်းသားတွေအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကြက်သွန်ဖြူဈေးက အရမ်းကြီးပြီး နေ့တိုင်း မစားနိုင်တော့လို့ပေါ့၊ ဖြည့်စွက်ပြောရရင်တော့ " 算你狠 suàn nǐ hěn နင် အရမ်း ရက်စက်တယ်ဟာ " က " 算 suàn " နဲ့ " 大蒜 dàsuàn ကြက်သွန်ဖြူ " က " 蒜 suàn " နဲ့ အသံတူနေတော့၊ လူတွေအားလုံးက ပြောကြတော့တာပေါ့ " 蒜你狠 suàn nǐ hěn ရက်စက်လိုက်တာ ကြက်သွန်ဖြူရယ် " ။
1. 蒜你狠〔suàn nǐ hěn〕ရက်စက်လိုက်တာ ကြက်သွန်ဖြူရယ်
6. 应该〔yīnggāi〕... သင့်သည်
7. 写作〔xiězuò〕စာပေပြုစုရေးသားသည်။ ဆောင်းပါးရေးသည်
8. 算你狠〔suàn nǐ hěn〕နင် အရမ်း ရက်စက်တယ်
9. 意思〔yìsī〕အဓိပ္ပာယ်။ သဘော
10. 好吧〔hǎoba〕 ကောင်းပြီ
11. 你〔nǐ〕မင်း။ နင်။ ခင်ဗျား
13. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
14. 我们〔wǒmen〕ငါတို့။ ကျွန်တော်တို့
15. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်
17. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
19. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
20. 场合〔chǎnghé〕 နေရာ
22. 女朋友〔nǚpéngyǒu〕girl friend
23. 给〔gěi〕 ပေးသည်
24. 戴绿帽子〔dài lǜmàozi〕လိမ်ညာလှည့်စားသည်
27. 却〔què〕... တော့
28. 又〔yòu〕လည်းပဲ။ နောက်ထပ်
32. 只〔zhǐ〕သာလျှင်။ ပဲ
33. 能〔néng〕... နိုင်သည်
34. 对〔duì〕... ကို။ အား
36. 说〔shuō〕 ပြောသည်
37. 那〔nà〕အဲဒါ။ ဟိုဟာ
39. 会〔huì〕... တတ်သည်။ လိမ့်မယ်
40. 变成〔biànchéng〕... အဖြစ် ပြောင်းလဲသည်
42. 这个〔zhège〕ဒါ။ ဒီဟာ
43. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
48. 各地〔gèdì〕 နေရာစုံ
49. 价格〔jiàgé〕 ဈေးနှုန်း
50. 涨〔zhǎng〕တိုးမြင့်လာသည်။ တက်လာသည်
52. 厉害〔lìhài〕 ပြင်းထန်သော။ အသည်းအသန်
56. 每〔měi〕... တိုင်း
57. 斤〔jīn〕တရုတ်ပိဿာ။ ကီလို
58. 2.5元〔èr diǎn wǔ yuán〕၂.၅ ယွမ်
61. 已经〔yǐjīng〕... ပြီးနှင့်ပြီ
62. 到〔dào〕... အထိ။ ရောက်သည်
63. 6.7元〔liù diǎn qī yuán〕၆.၇ ယွမ်
65. 山东〔Shāngdōng〕Shandong ပြည်နယ်
66. 目前〔mùqián〕လက်ရှိ။ မျက်မှောက်
67. 达到〔dádào〕 ရောက်ရှိသည်
68. 20元〔èrshí yuán〕၂၀ ယွမ်
76. 会〔huì〕... လိမ့်မယ်။ တတ်သည်
77. 免费〔miǎnfèi〕အခမဲ့။ စရိတ်ငြိမ်း
78. 无论〔wúlùn〕... ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
79. 包子〔bāozi〕 ပေါက်စီ
82. 对于〔duìyú〕... ကို။ အား
83. 爱〔ài〕ချစ်သည်။ ကြိုက်သည်
84. 北方人〔běifāngrén〕 မြောက်ပိုင်းသား
85. 来说〔láishuō〕 ပြောရရင်
86. 可〔kě〕... တော့
87. 一件〔yíjiàn〕တစ်ခု။ တစ်ရပ်
88. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
90. 想〔xiǎng〕... ချင်သည်
92. 太〔tài〕အရမ်း။ သိပ်
93. 贵〔guì〕 ဈေးကြီးသော
94. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
95. 天天〔tiāntian〕 နေ့တိုင်း
96. 再加上〔zài jiāshàng〕ထပ်မံ ဖြည့်စွက်သည်
97. 算〔suàn〕တွက်ချက်သည်။ ကြံရွယ်သည်
သငျ ကွကျသှနျဖွူစားရတာ ကွိုကျပါသလား။ တရုတျပွညျ မွောကျပိုငျးသားတှကေတော့ အရမျး ကွိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွကျသှနျဖွူဈေးတှကေ အဆမတနျတကျနတေော့လညျး .....
အမှနျက အဲဒါ 算你狠 suàn nǐ hěn လို့ ရေးရမှာပါ၊ အဓိပ်ပာယျက " ကောငျးပွီ၊ မငျး နိုငျပါတယျ " ပေါ့။
[ 蒜你狠 နဲ့ 算你狠 တရုတျစာလုံး မတူတာ သတိပွု ]
ကြှနျတျောတို့က ဒီလို အခွအေနမြေိုးမှာ ရှိနိုငျတယျ၊ ဥပမာ ခငျဗြားရဲ့ girl friend က ခငျဗြားကို လှညျ့စားသှားတော့ ခငျဗြား အရမျး ဒေါသထှကျတယျ၊ ဘာမှလညျး မတတျနိုငျဘူး၊ ဒီတော့ ခငျဗြားက " 算你狠 suàn nǐ hěn နငျ အရမျး ရကျစကျတယျဟာ " လို့ပဲ ပွောလို့ရမယျ။
ဒါဆိုရငျ ဘာကွောငျ့ 算你狠 suàn nǐ hěn က 蒜你狠 suàn nǐ hěn လို့ ပွောငျးသှားရတာလဲ။
ဒါက ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ဆကျစပျမှု ရှိပါတယျ။
အခု တရုတျပွညျရဲ့ နရောတိုငျးမှာ ကွကျသှနျဖွူ ဈေးနှုနျးတှကေ ဆိုးဆိုးရှားရှား မွငျ့တကျနပေါတယျ။
မနှဈက ဇူလိုငျလမှာ ကွကျသှနျဖွူ လကျကားဈေးက တဈကီလိုကို ၂.၅ ယှမျပါ၊ ဒါပမေယျ့ အခု တဈကီလိုကို ၆.၇ ယှမျအထိ ဈေးတကျသှားပါပွီ။
အထူးသဖွငျ့တော့ Shandong ပွညျနယျပေါ့၊ လကျရှိမှာ ကွကျသှနျဖွူဈေးက တဈကီလိုကို ၂၀ ယှမျအထိ ရောကျနပေါပွီ၊ ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ အရငျက ဆိုငျကလေးတှမှော ထမငျးသှားစားရငျ ကွကျသှနျဖွူကို အလကားစားလို့ရပါတယျ၊ အခု ပေါကျစီပဲစားစား၊ ဖကျထုပျပဲစားစား ကွကျသှနျဖွူ အလကားစားလို့ မရတော့ဘူး။
ကွကျသှနျဖွူ အရမျးကွိုကျတဲ့ မွောကျပိုငျးသားတှအေနနေဲ့ ပွောရရငျတော့ ဒါဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ ကိစ်စတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး၊ ကွကျသှနျဖွူဈေးက အရမျးကွီးပွီး နတေို့ငျး မစားနိုငျတော့လို့ပေါ့၊ ဖွညျ့စှကျပွောရရငျတော့ " 算你狠 suàn nǐ hěn နငျ အရမျး ရကျစကျတယျဟာ " က " 算 suàn " နဲ့ " 大蒜 dàsuàn ကွကျသှနျဖွူ " က " 蒜 suàn " နဲ့ အသံတူနတေော့၊ လူတှအေားလုံးက ပွောကွတော့တာပေါ့ " 蒜你狠 suàn nǐ hěn ရကျစကျလိုကျတာ ကွကျသှနျဖွူရယျ " ။
1. 蒜你狠〔suàn nǐ hěn〕ရကျစကျလိုကျတာ ကွကျသှနျဖွူရယျ
6. 应该〔yīnggāi〕... သငျ့သညျ
7. 写作〔xiězuò〕စာပပွေုစုရေးသားသညျ။ ဆောငျးပါးရေးသညျ
8. 算你狠〔suàn nǐ hěn〕နငျ အရမျး ရကျစကျတယျ
9. 意思〔yìsī〕အဓိပ်ပာယျ။ သဘော
10. 好吧〔hǎoba〕 ကောငျးပွီ
11. 你〔nǐ〕မငျး။ နငျ။ ခငျဗြား
13. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
14. 我们〔wǒmen〕ငါတို့။ ကြှနျတျောတို့
15. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ
17. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
19. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
20. 场合〔chǎnghé〕 နရော
23. 给〔gěi〕 ပေးသညျ
24. 戴绿帽子〔dài lǜmàozi〕လိမျညာလှညျ့စားသညျ
27. 却〔què〕... တော့
28. 又〔yòu〕လညျးပဲ။ နောကျထပျ
32. 只〔zhǐ〕သာလြှငျ။ ပဲ
33. 能〔néng〕... နိုငျသညျ
36. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
39. 会〔huì〕... တတျသညျ။ လိမျ့မယျ
40. 变成〔biànchéng〕... အဖွဈ ပွောငျးလဲသညျ
43. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
48. 各地〔gèdì〕 နရောစုံ
49. 价格〔jiàgé〕 ဈေးနှုနျး
50. 涨〔zhǎng〕တိုးမွငျ့လာသညျ။ တကျလာသညျ
52. 厉害〔lìhài〕 ပွငျးထနျသော။ အသညျးအသနျ
56. 每〔měi〕... တိုငျး
57. 斤〔jīn〕တရုတျပိဿာ။ ကီလို
58. 2.5元〔èr diǎn wǔ yuán〕၂.၅ ယှမျ
61. 已经〔yǐjīng〕... ပွီးနှငျ့ပွီ
62. 到〔dào〕... အထိ။ ရောကျသညျ
63. 6.7元〔liù diǎn qī yuán〕၆.၇ ယှမျ
65. 山东〔Shāngdōng〕Shandong ပွညျနယျ
66. 目前〔mùqián〕လကျရှိ။ မကျြမှောကျ
67. 达到〔dádào〕 ရောကျရှိသညျ
68. 20元〔èrshí yuán〕၂၀ ယှမျ
76. 会〔huì〕... လိမျ့မယျ။ တတျသညျ
77. 免费〔miǎnfèi〕အခမဲ့။ စရိတျငွိမျး
78. 无论〔wúlùn〕... ပဲ ဖွဈဖွဈ
79. 包子〔bāozi〕 ပေါကျစီ
83. 爱〔ài〕ခဈြသညျ။ ကွိုကျသညျ
84. 北方人〔běifāngrén〕 မွောကျပိုငျးသား
85. 来说〔láishuō〕 ပွောရရငျ
86. 可〔kě〕... တော့
87. 一件〔yíjiàn〕တဈခု။ တဈရပျ
88. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
90. 想〔xiǎng〕... ခငျြသညျ
92. 太〔tài〕အရမျး။ သိပျ
93. 贵〔guì〕 ဈေးကွီးသော
94. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
95. 天天〔tiāntian〕 နတေို့ငျး
96. 再加上〔zài jiāshàng〕ထပျမံ ဖွညျ့စှကျသညျ
97. 算〔suàn〕တှကျခကျြသညျ။ ကွံရှယျသညျ
3:55 AM C-Joke , Chinese
ကောင်မလေးက သူ့ရဲ့ချစ်သူကို မချိန်းတွေ့ခင်မှာ သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြပါသလဲ။
女 孩：在 我 们 出 去 玩 之 前 ，我 要 警 告 你 ，不 准 你 碰，抱 我，吻 我，也 不 准 你 带 我 到 不 三 不 四 的 地 方 ，知 道 吗 ？
မိန်းကလေး ☞ ကျွန်မတို့ လျှောက်မလည်ခင် ရှင့်ကို ကျွန်မ သတိပေးမယ်၊ ရှင် ကျွန်မကို ထိလို့၊ ဖက်လို့၊ နမ်းလို့ မရဘူး၊ ပေါက်ကရနေရာတွေကိုလည်း ကျွန်မကို ခေါ်သွားလို့ မရဘူး၊ သဘောပေါက်လား။
男 孩：知 道 了 。
ယောင်္ကျားလေး ☞ သဘောပေါက်ပါတယ်။
女 孩：好 ，现 在 告 诉 我 ，你 要 带 我 去 哪 里 ？
မိန်းကလေး ☞ ကောင်းပြီ၊ အခု ကျွန်မကို ပြောပြပါ၊ ရှင် ကျွန်မကို ဘယ်လိုက်ပို့မှာလဲ။
男 孩：送 你 回 家 。
ယောင်္ကျားလေး ☞ ကိုယ် မင်းကို အိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်။
2. 在...之前〔zài...zhīqián〕... မတိုင်မီ
4. 出去玩〔chūqùwán〕 လျှောက်လည်သည်
5. 我〔wǒ〕ငါ။ ကျွန်တော်။ ကျွန်မ
6. 要〔yào〕... မယ်
8. 你〔nǐ〕မင်း။ သင်။ နင်
9. 不准〔bù zhǔn〕ခွင့်မပြုပါ
13. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
14. 带〔dài〕 ခေါ်ဆောင်သည်
15. 到〔dào〕 ရောက်သည်။ ... အထိ
16. 不三不四〔bùsān bùsì〕ဟိုမရောက် ဒီမရောက်
17. 地方〔dìfāng〕 နေရာ။ ဒေသ
19. 吗〔ma〕... လား။ သလား
20. 男孩〔nánhái〕 ယောင်္ကျားလေး
21. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
22. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
24. 告诉〔gàosù〕 ပြောပြသည်
26. 哪里〔nǎlǐ〕ဘယ် ... လဲ
ကောငျမလေးက သူ့ရဲ့ခဈြသူကို မခြိနျးတှခေ့ငျမှာ သတိပေးခကျြတှေ ထုတျပွနျနပေါတယျ။ အဲဒီတော့ ဘာတှေ ဆကျဖွဈကွပါသလဲ။
မိနျးကလေး ☞ ကြှနျမတို့ လြှောကျမလညျခငျ ရှငျ့ကို ကြှနျမ သတိပေးမယျ၊ ရှငျ ကြှနျမကို ထိလို့၊ ဖကျလို့၊ နမျးလို့ မရဘူး၊ ပေါကျကရနရောတှကေိုလညျး ကြှနျမကို ချေါသှားလို့ မရဘူး၊ သဘောပေါကျလား။
ယောကငြ်္ားလေး ☞ သဘောပေါကျပါတယျ။
မိနျးကလေး ☞ ကောငျးပွီ၊ အခု ကြှနျမကို ပွောပွပါ၊ ရှငျ ကြှနျမကို ဘယျလိုကျပို့မှာလဲ။
ယောကငြ်္ားလေး ☞ ကိုယျ မငျးကို အိမျပွနျပို့ပေးမယျ။
2. 在...之前〔zài...zhīqián〕... မတိုငျမီ
4. 出去玩〔chūqùwán〕 လြှောကျလညျသညျ
5. 我〔wǒ〕ငါ။ ကြှနျတျော။ ကြှနျမ
6. 要〔yào〕... မယျ
8. 你〔nǐ〕မငျး။ သငျ။ နငျ
9. 不准〔bù zhǔn〕ခှငျ့မပွုပါ
13. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
14. 带〔dài〕 ချေါဆောငျသညျ
15. 到〔dào〕 ရောကျသညျ။ ... အထိ
16. 不三不四〔bùsān bùsì〕ဟိုမရောကျ ဒီမရောကျ
17. 地方〔dìfāng〕 နရော။ ဒသေ
20. 男孩〔nánhái〕 ယောကငြ်္ားလေး
21. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
22. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
24. 告诉〔gàosù〕 ပွောပွသညျ
26. 哪里〔nǎlǐ〕ဘယျ ... လဲ
နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) တွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ။
3:40 AM C-News , Chinese
ဘာသာစကား လေ့လာလိုသူများအတွက် ညနေပိုင်း နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်းများ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်ဖွင့်မည်။
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)တွင် ညနေပိုင်းနိုင်ငံခြားဘာသာစကား သင်တန်းများကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်၌ စတင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ၂ ရက်တွင် နောက်ဆုံးလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ညနေပိုင်းသင်တန်းများအဖြစ် အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ဂျာမန်၊ ရုရှား၊ ပြင်သစ်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်းနှင့်မြန်မာဘာသာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)မှ သိရသည်။
‘‘ညနေပိုင်း HRD သင်တန်း တွေကို ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘာသာစကားလိုအပ်ချက်အရ တက်နိုင်အောင် ဖွင့်ပေးထားတာပါ။ ဘာသာရပ်အလိုက် ဆရာရှိတဲ့အင်အားနဲ့ သင်ကြားပေးထားတာ ပါ’’ဟု နိုင်ငံခြားဘာသာတက္က သိုလ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ညနေပိုင်း သင်တန်းတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်တန်း အတွက် သင်တန်းသားဦးရေ ၆၀၀သတ်မှတ်ထားပြီး အခြားဘာသာ စကားသင်တန်းများတွင် သင်တန်း သားဦးရေ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ဦးခန့် ခေါ်ယူသင်ကြားရန် စီစဉ်ထား ကြောင်း နိုင်ငံခြားဘာသာတက္က သိုလ်မှ သိရသည်။
ညနေပိုင်းသင်တန်းများ၏ သင်တန်းကြေးမှာ သုံးလသင်တန်း တစ်ခုလျှင် ကျပ်သုံးသောင်းပေး သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာနေ့ များတွင် ညနေ ၅ နာရီခွဲမှ ၇ နာရီ ထိ သင်ကြားမည်ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်ထိ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် သင်တန်း လျှောက်လွှာများလက်ခံမည် ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူများသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအမှတ်စာရင်း၊ သို့မဟုတ် ဘွဲ့လက်မှတ်နှင့် ဓာတ်ပုံ သုံးပုံတို့ဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ် သည်။
‘‘UFL က ညနေပိုင်းသင်တန်းတွေ တက်ဖို့ လျှောက်တဲ့သူက နှစ်တိုင်းများတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဆိုတော့ ညနေပိုင်းတက်ရတာ ပိုအဆင်ပြေလို့တက်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်’’ဟု ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)တွင် ညနေပိုင်း နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်းများကို ၁၉၉၇ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင် ကြားနေခြင်းဖြစ်သည်။
3:35 AM C-Draw , Chinese
“စိမ်းလန်းတာ၊ ငယ်ရွယ်နုပျိုတာ” တွေကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက် 青 ဆိုတဲ့ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးကို အသုံးပြုရပါတယ်။ စုတ်ချက် အဆင့်ဆင့် ရေးသားနည်းတွေကို လေ့လာကြပါစို့။
3:31 AM C-Draw , Chinese
空 ဆိုတာက “ဗလာ၊ နတ္ထိ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြပါတယ်။ “ဘာမှမရှိ၊ လွတ်နေဟာနေတယ်၊ လစ်လပ်နေတယ်၊ အားလပ်နေတယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
3:27 AM C-Draw , Chinese
“လေ” ကို တရုတ်လို 气 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၀ါယောဓာတ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ တရုတ်သိုင်းပညာရပ်တွေထဲက “ချိ” ဆိုတာ ဒီစာလုံးလေးပေါ့။
3:23 AM C-Draw , Chinese
么 ဆိုတာက မေးခွန်းတွေရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ “လား၊ လဲ” စတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးကို ဖော်ပြပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ စာလုံးလေးမို့ လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။
3:19 AM C-Draw , Chinese
ဒီနေ့ လေ့လာကြမယ့် တရုတ်စာလုံးက မေးခွန်းမေးတဲ့အခါ အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ စာလုံးလေးပါ။ “ဘာလဲ” လို့ မေးတဲ့အခါ 什 ဆိုတဲ့ တရုတ်စာလုံးကို သုံးရပါတယ်။
3:14 AM C-Draw , Chinese
“ပိတ်သည်” ဆိုတာကို တရုတ်လို 关 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ “တံခါးပိတ်တာ၊ စာအုပ်ပိတ်တာ၊ ဆိုင်ပိတ်တာ၊ မီးပိတ်တာ” စတာတွေမှာ ဒီစာလုံးကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
5:34 PM J-Word , Japanese
အချိန်နာရီတွေကို ဘယ်လို ပြောရသလဲ သင် သိပါသလား။ နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့် ...က စလို့ အချိန်နာရီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
11. 15分〔juugo-fun〕၁၅ မိနစ်
12. 20分〔nijuppun〕၂၀ မိနစ်
13. 30分〔sanjuppun〕၃၀ မိနစ်
14. 40分〔yonjuppun〕၄၀ မိနစ်
15. 今何時ですか。〔ima nanji desuka?〕အခု ဘယ်နှစ်နာရီလဲ။
16. 3時です。〔san-ji desu.〕၃ နာရီပါ။
17. 1時5分〔ichi-ji go-fun〕၁ နာရီ ၅ မိနစ်
18. 1時10分〔ichi-ji juppun〕၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်
19. 1時15分〔ichi-ji juugo-fun〕၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်
20. 1時20分〔ichi-ji nijuppun〕၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်
21. 1時25分〔ichi-ji nijuugo-fun〕၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်
22. 1時半〔ichi-ji han〕၁ နာရီ ခွဲ
23. 1時35分〔ichi-ji sanjuugo-fun〕၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်
24. 1時40分〔ichi-ji yonjuppun〕၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်
25. 2時15分前〔ni-ji juugo-fun mae〕၂ နာရီ ထိုးဖို့ ၁၅ မိနစ်
26. 2時10分前〔ni-ji juppun mae〕၂ နာရီ ထိုးဖို့ ၁၀ မိနစ်
27. 2時5分前〔ni-ji go-fun mae〕၂ နာရီ ထိုးဖို့ ၅ မိနစ်
28. 2時〔ni-ji〕၂ နာရီ
5:27 PM C-Text , Chinese
奶粉钱 ဆိုတာက နို့မှုန့်ဖိုးကို ပြောတာပါ။ စကားပြောကြတဲ့အခါ ဒီဝေါဟာရကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ ပြောဆိုကြတာလဲ။
现 在 很 多 年 轻 人 都 会 说 “ 我 要 努 力 工 作 ，赚 奶 粉 钱 ” ，你 可 能 要 问 ，中 国 的 奶 粉 很 贵 吗 ？
အခုခေတ် လူငယ်အများစုက ပြောကြလိမ့်မယ် " ငါ နို့မှုန့်ဖိုးရှာဖို့ အလုပ်ကြိုးစားရမယ် " ၊ သင် မေးကောင်းမေးနိုင်တယ် " တရုတ်ပြည်မှာ နို့မှုန့်ဖိုးက အရမ်းဈေးကြီးလို့လား " ။
的 确 ，“ 奶 粉 钱 ” 字 面 上 的 意 思 是 “ 买 奶 粉 要 花 的 钱 ” ，但 是 现 在 奶 粉 钱 不 单 单 指 这 个 意 思 了 ，它 包 括 了 孩 子 从 出 生 到 一 岁 这 个 过 程 中 花 的 所 有 的 钱 。
အမှန်က 奶粉钱 - နို့မှုန့်ဖိုး ဆိုတာ စာအသုံးအနှုန်း အဓိပ္ပာယ်အရ နို့မှုန့်ဝယ်ဖို့ ကုန်ကျတဲ့ငွေပါ၊ ဒါပေမယ့် အခု 奶粉钱 ဆိုတာ အဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြရုံသာမက၊ ကလေးတစ်ယောက် မွေးကင်းစကနေ တစ်နှစ်သားအထိ သုံးစွဲရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ဖော်ပြတာပါ။
现 在 养 孩 子 需 要 花 的 钱 越 来 越 多 ，一 个 月 单 单 买 奶 粉 就 要 花2千 多 元 ，这 对 于 收 入 不 高 的 家 庭 来 说 ，的 确 是 一 个 大 数 目 。
အခုခေတ် ကလေးယူမယ်ဆိုရင် သုံးစွဲဖို့ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးက ကြာလေများလေပဲ၊ နို့မှုန့် တစ်လစာဝယ်ရတာတင် ယွမ်နှစ်ထောင်ကျော်တယ်၊ ဒါဟာ ဝင်ငွေမများတဲ့ မိသားစု အနေနဲ့ ပြောရရင်၊ တကယ့်ကို များပြားလှတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ တစ်ခုပါ။
所 以 在 中 国 你 会 经 常 听 到 这 样 的 话 ：“ 没 攒 奶 粉 钱 ，不 敢 要 孩 子 ” ，“ 我 周 末 也 要 工 作 ，要 赚 奶 粉 钱 ，没 办 法 ” ……
ဒါကြောင့်မို့ တရုတ်ပြည်မှာ ဒီလို စကားမျိုးတွေကို ခင်ဗျား မကြာခဏ ကြားရလိမ့်မယ်၊ " နို့မှုန့်ဖိုး မစုထားတော့ ကလေးမယူရဲဘူး " ၊ " ငါက စနေရော တနင်္ဂနွေပါ အလုပ်ဆင်းရမယ်၊ နို့မှုန့်ဖိုး စုမိအောင်ပါ၊ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ " ......
5. 会〔huì〕... တတ်သည်။ လိမ့်မယ်
6. 说〔shuō〕 ပြောသည်
7. 我〔wǒ〕ငါ။ ကျွန်တော်။ ကျွန်မ
8. 要〔yào〕... မယ်။ ယူသည်
11. 赚〔zhuàn〕အမြတ်ရသည်။ ငွေရှာသည်
12. 奶粉钱〔nǎifěnqián〕 နို့မှုန့်ဖိုး
13. 你〔nǐ〕သင်။ မင်း။ ခင်ဗျား
14. 可能〔kěnéng〕... နိုင်သည်
15. 问〔wèn〕 မေးမြန်းသည်
17. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
19. 贵〔guì〕 ဈေးကြီးသော
20. 吗〔ma〕... လား။ သလား
21. 的确〔díquè〕အမှန်တကယ်ပဲ။ အစစ်ပဲ
22. 字面〔zìmiàn〕စာအားဖြင့်။ စာအသုံး
23. 上〔shàng〕အပေါ်။ တက်သည်
25. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
27. 奶粉〔nǎifěn〕 နို့မှုန့်
28. 花〔huā〕ကုန်ကျသည်။ သုံးစွဲသည်
29. 钱〔qián〕 ငွေ။ ပိုက်ဆံ
32. 单单〔dāndān〕သာလျှင်။ ပဲ
33. 指〔zhǐ〕 ထောက်ပြသည်။ ညွှန်ပြသည်
34. 这个〔zhège〕ဒါ။ ဒီဟာ
35. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
37. 包括〔bāokuò〕ပါဝင်သည်။ အကျုံးဝင်သည်
39. 从...到〔cóng...dào〕... မှ ... အထိ
40. 出生〔chūshēng〕 မွေးဖွားသည်
41. 一岁〔yísuì〕( အသက် ) တစ်နှစ်
42. 过程〔guòchéng〕 ဖြစ်စဉ်
44. 所有〔suǒyǒu〕ရှိရှိသမျှ။ အားလုံး
45. 养〔yǎng〕 မွေးမြူသည်။ ပြုစုပျိုးထောင်သည်
47. 越来越...〔yuèlái yuè...〕ကြာလေ ... လေ
49. 一个月〔yíge yuè〕တစ်လကြာ
50. 就要〔jiùyào〕... တော့မယ်
51. 2千多〔liǎngqiān duō〕 နှစ်ထောင်ကျော်
52. 元〔yuán〕ယွမ် ( တရုတ်ငွေ )
53. 这〔zhè〕ဒါ။ ဒီဟာ
54. 对于〔duìyú〕... ကို။ အား
55. 收入〔shōurù〕ဝင်ငွေ။ သိမ်းယူသည်
56. 高〔gāo〕 မြင့်သော
58. 来说〔láishuō〕... ပြောရရင်
60. 大数目〔dàshùmù〕များပြားတဲ့ ပမာဏ
62. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
63. 经常〔jīngcháng〕အမြဲတမ်း။ မကြာခဏ
67. 没〔méi〕မ။ မ ... ခဲ့
68. 攒〔zǎn〕စုသည်။ စုဆောင်းထားသည်
69. 敢〔gǎn〕... ရဲသည်
70. 周末〔zhōumò〕စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ
71. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
72. 没办法〔méi bànfǎ〕မတတ်နိုင်ပါ
သငျရော နို့မှုနျ့ဖိုး စုဆောငျးပွီးပွီလား။
奶粉钱 ဆိုတာက နို့မှုနျ့ဖိုးကို ပွောတာပါ။ စကားပွောကွတဲ့အခါ ဒီဝေါဟာရကို ဘယျလို အဓိပ်ပာယျမြိုးနဲ့ ပွောဆိုကွတာလဲ။
အခုခတျေ လူငယျအမြားစုက ပွောကွလိမျ့မယျ " ငါ နို့မှုနျ့ဖိုးရှာဖို့ အလုပျကွိုးစားရမယျ " ၊ သငျ မေးကောငျးမေးနိုငျတယျ " တရုတျပွညျမှာ နို့မှုနျ့ဖိုးက အရမျးဈေးကွီးလို့လား " ။
အမှနျက 奶粉钱 - နို့မှုနျ့ဖိုး ဆိုတာ စာအသုံးအနှုနျး အဓိပ်ပာယျအရ နို့မှုနျ့ဝယျဖို့ ကုနျကတြဲ့ငှပေါ၊ ဒါပမေယျ့ အခု 奶粉钱 ဆိုတာ အဲဒီအဓိပ်ပာယျကို ဖျောပွရုံသာမက၊ ကလေးတဈယောကျ မှေးကငျးစကနေ တဈနှဈသားအထိ သုံးစှဲရတဲ့ ကုနျကစြရိတျအားလုံးကို ဖျောပွတာပါ။
အခုခတျေ ကလေးယူမယျဆိုရငျ သုံးစှဲဖို့ လိုအပျတဲ့ ငှကွေေးက ကွာလမြေားလပေဲ၊ နို့မှုနျ့ တဈလစာဝယျရတာတငျ ယှမျနှဈထောငျကြျောတယျ၊ ဒါဟာ ဝငျငှမေမြားတဲ့ မိသားစု အနနေဲ့ ပွောရရငျ၊ တကယျ့ကို မြားပွားလှတဲ့ ငှကွေေးပမာဏ တဈခုပါ။
ဒါကွောငျ့မို့ တရုတျပွညျမှာ ဒီလို စကားမြိုးတှကေို ခငျဗြား မကွာခဏ ကွားရလိမျ့မယျ၊ " နို့မှုနျ့ဖိုး မစုထားတော့ ကလေးမယူရဲဘူး " ၊ " ငါက စနရေော တနင်ျဂနှပေါ အလုပျဆငျးရမယျ၊ နို့မှုနျ့ဖိုး စုမိအောငျပါ၊ ဘယျတတျနိုငျမလဲ " ......
5. 会〔huì〕... တတျသညျ။ လိမျ့မယျ
6. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
7. 我〔wǒ〕ငါ။ ကြှနျတျော။ ကြှနျမ
8. 要〔yào〕... မယျ။ ယူသညျ
11. 赚〔zhuàn〕အမွတျရသညျ။ ငှရှောသညျ
12. 奶粉钱〔nǎifěnqián〕 နို့မှုနျ့ဖိုး
13. 你〔nǐ〕သငျ။ မငျး။ ခငျဗြား
14. 可能〔kěnéng〕... နိုငျသညျ
15. 问〔wèn〕 မေးမွနျးသညျ
17. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
19. 贵〔guì〕 ဈေးကွီးသော
21. 的确〔díquè〕အမှနျတကယျပဲ။ အစဈပဲ
22. 字面〔zìmiàn〕စာအားဖွငျ့။ စာအသုံး
23. 上〔shàng〕အပျေါ။ တကျသညျ
25. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
27. 奶粉〔nǎifěn〕 နို့မှုနျ့
28. 花〔huā〕ကုနျကသြညျ။ သုံးစှဲသညျ
29. 钱〔qián〕 ငှေ။ ပိုကျဆံ
32. 单单〔dāndān〕သာလြှငျ။ ပဲ
33. 指〔zhǐ〕 ထောကျပွသညျ။ ညှနျပွသညျ
35. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
37. 包括〔bāokuò〕ပါဝငျသညျ။ အကြုံးဝငျသညျ
39. 从...到〔cóng...dào〕... မှ ... အထိ
40. 出生〔chūshēng〕 မှေးဖှားသညျ
41. 一岁〔yísuì〕( အသကျ ) တဈနှဈ
42. 过程〔guòchéng〕 ဖွဈစဉျ
44. 所有〔suǒyǒu〕ရှိရှိသမြှ။ အားလုံး
45. 养〔yǎng〕 မှေးမွူသညျ။ ပွုစုပြိုးထောငျသညျ
47. 越来越...〔yuèlái yuè...〕ကွာလေ ... လေ
49. 一个月〔yíge yuè〕တဈလကွာ
50. 就要〔jiùyào〕... တော့မယျ
51. 2千多〔liǎngqiān duō〕 နှဈထောငျကြျော
52. 元〔yuán〕ယှမျ ( တရုတျငှေ )
55. 收入〔shōurù〕ဝငျငှေ။ သိမျးယူသညျ
56. 高〔gāo〕 မွငျ့သော
58. 来说〔láishuō〕... ပွောရရငျ
60. 大数目〔dàshùmù〕မြားပွားတဲ့ ပမာဏ
62. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
63. 经常〔jīngcháng〕အမွဲတမျး။ မကွာခဏ
68. 攒〔zǎn〕စုသညျ။ စုဆောငျးထားသညျ
69. 敢〔gǎn〕... ရဲသညျ
70. 周末〔zhōumò〕စနနှေငျ့ တနင်ျဂနှေ
71. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
72. 没办法〔méi bànfǎ〕မတတျနိုငျပါ
5:14 PM C-Draw , Chinese
奶 ဆိုတာက မြန်မာလို “နို့” ကို ခေါ်တာပါ။ “ နွားနို့၊ နို့မှုန့်” စတဲ့ ဝေါဟာရတွေမှာ ဒီစာလုံးကို သုံးပါတယ်။ ဒီစာလုံး နှစ်လုံးတွဲလိုက်ရင်တော့ “အဘွား” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့။
10:37 PM C-Album , Chinese
“ရှီးပဒီး” ဆိုတာ ရေခဲတောင်များမှာသာ တွေ့ရတဲ့ ပိုးကောင်တစ်ပိုင်း၊ အပင်တစ်ပိုင်း ဆေးမြစ်ပါ။ ဆေးဖက်ဝင် ရှားပါးပြီး တန်ဖိုးလည်း ကြီးပါတယ်။
10:27 PM C-Draw , Chinese
စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေတဲ့။ “စာအုပ်” ကို တရုတ်လို 书 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် လေ့ကျင့်ကြမယ့် တရုတ်စာလုံးလေးပေါ့။
10:20 PM C-Joke , Chinese
တန်းစီတယ်ဆိုတာဟာ နိုင်ငံကြီးသားပီသတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ သင်ရော တန်းစီရတာ သဘောကျပါသလား။
在 酒 吧
男 人：你 的 裙 子 真 漂 亮 ，可 以 坐 你 旁 边 吗 ？
ယောင်္ကျားလေး ☞ မင်းရဲ့စကတ်လေး အရမ်းလှတယ်၊ မင်းဘေးမှာ ထိုင်လို့ရမလား။
女 人：好 的 ，你 坐 吧 。
မိန်းကလေး ☞ ကောင်းပါပြီ၊ ရှင်ထိုင်လေ။
男 人：我 请 你 喝 杯 酒 ，怎 么 样 ？
ယောင်္ကျားလေး ☞ ငါ မင်းကို တိုက်မယ်လေ၊ ဘယ်လိုလဲ။
女 人：好 啊 ，我 要 鸡 尾 酒 。
မိန်းကလေး ☞ ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်မ ကောက်တေးသောက်မယ်။
男 人：什 么 鸡 尾 酒 ？
ယောင်္ကျားလေး ☞ ဘာကောက်တေးလဲ။
女 人：玛 格 丽 特 。
မိန်းကလေး ☞ Margarita.
男 人：你 的 眼 睛 和 头 发 真 美 。
ယောင်္ကျားလေး ☞ မင်းမျက်လုံးလေးနဲ့ ဆံပင်လေးက အရမ်းလှတယ်နော်။
女 人：哪 里 哪 里 。
မိန်းကလေး ☞ ဘယ်ကလာ ( ရှင်ကလဲ ) ။
男 人：可 以 给 我 你 的 电 话 号 码 吗 ？
ယောင်္ကျားလေး ☞ မင်းဖုန်းနံပါတ်လေး ပေးလို့ရမလား။
女 人：可 以 ，可 是 我 已 经 有 男 朋 友 了 。
မိန်းကလေး ☞ ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မမှာ ဘဲရှိတယ်နော်။
男 人：没 关 系 ，我 喜 欢 排 队 。
ယောင်္ကျားလေး ☞ ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ငါက တန်းစီရတာ သဘောကျတယ်။
1. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်
3. 男人〔nánrén〕 ယောင်္ကျားလေး
4. 你〔nǐ〕သင်။ နင်။ မင်း
5. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။သော
9. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်
11. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘက်
14. 好的〔hǎode〕 ကောင်းပြီ
15. 吧〔ba〕... ပါ။ ပေါ့နော်
16. 我〔wǒ〕ငါ။ ကျွန်တော်။ ကျွန်မ
17. 请〔qǐng〕 ကျေးဇူးပြု၍
18. 喝〔hē〕 သောက်သည်
22. 好啊〔hǎo a〕 ကောင်းပါပြီ
23. 要〔yào〕... မယ်
24. 鸡尾酒〔jīwěijiǔ〕 ကောက်တေး
32. 哪里哪里〔nǎlǐ nǎlǐ〕ဘယ်ကလာ
33. 给〔gěi〕 ပေးသည်
34. 电话号码〔diànhuà hàomǎ〕ဖုန်းနံပါတ်
36. 已经〔yǐjīng〕... ပြီးနှင့်ပြီ
38. 男朋友〔nánpéngyǒu〕ရည်းစား။ ဘဲ
39. 了〔le〕... ပြီးပြီ
41. 喜欢〔xǐhuān〕ကြိုက်သည်။ သဘောကျသည်
တနျးစီတယျဆိုတာဟာ နိုငျငံကွီးသားပီသတဲ့ လုပျရပျတဈခုပါ။ သငျရော တနျးစီရတာ သဘောကပြါသလား။
ယောကငြ်္ားလေး ☞ မငျးရဲ့စကတျလေး အရမျးလှတယျ၊ မငျးဘေးမှာ ထိုငျလို့ရမလား။
မိနျးကလေး ☞ ကောငျးပါပွီ၊ ရှငျထိုငျလေ။
ယောကငြ်္ားလေး ☞ ငါ မငျးကို တိုကျမယျလေ၊ ဘယျလိုလဲ။
မိနျးကလေး ☞ ကောငျးပါပွီ၊ ကြှနျမ ကောကျတေးသောကျမယျ။
ယောကငြ်္ားလေး ☞ ဘာကောကျတေးလဲ။
မိနျးကလေး ☞ Margarita.
ယောကငြ်္ားလေး ☞ မငျးမကျြလုံးလေးနဲ့ ဆံပငျလေးက အရမျးလှတယျနျော။
မိနျးကလေး ☞ ဘယျကလာ ( ရှငျကလဲ ) ။
ယောကငြ်္ားလေး ☞ မငျးဖုနျးနံပါတျလေး ပေးလို့ရမလား။
မိနျးကလေး ☞ ရပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမမှာ ဘဲရှိတယျနျော။
ယောကငြ်္ားလေး ☞ ကိစ်စမရှိပါဘူး၊ ငါက တနျးစီရတာ သဘောကတြယျ။
1. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသညျ
3. 男人〔nánrén〕 ယောကငြ်္ားလေး
4. 你〔nǐ〕သငျ။ နငျ။ မငျး
5. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။သော
9. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ
11. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘကျ
14. 好的〔hǎode〕 ကောငျးပွီ
15. 吧〔ba〕... ပါ။ ပေါ့နျော
16. 我〔wǒ〕ငါ။ ကြှနျတျော။ ကြှနျမ
17. 请〔qǐng〕 ကြေးဇူးပွု၍
18. 喝〔hē〕 သောကျသညျ
22. 好啊〔hǎo a〕 ကောငျးပါပွီ
23. 要〔yào〕... မယျ
24. 鸡尾酒〔jīwěijiǔ〕 ကောကျတေး
32. 哪里哪里〔nǎlǐ nǎlǐ〕ဘယျကလာ
33. 给〔gěi〕 ပေးသညျ
34. 电话号码〔diànhuà hàomǎ〕ဖုနျးနံပါတျ
36. 已经〔yǐjīng〕... ပွီးနှငျ့ပွီ
38. 男朋友〔nánpéngyǒu〕ရညျးစား။ ဘဲ
39. 了〔le〕... ပွီးပွီ
41. 喜欢〔xǐhuān〕ကွိုကျသညျ။ သဘောကသြညျ
9:07 PM C-Text , Chinese
ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ကို ပညာသင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာတွေကို ပူဇော်ကန်တော့လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဆရာများနေ့ကို ကျင်းပကြပါတယ်။
你 们 的 国 家 有 教 师 节 吗 ？
သင်တို့နိုင်ငံမှာ ဆရာများနေ့ ရှိပါသလား။
中 国 的 教 师 节 是 每 年 的9月 10 日 。
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဆရာများနေ့ကတော့ နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ပါ။
每 到 教 师 节 这 一 天 ，学 生 们 会 送 花 给 自 己 的 老 师 ，表 达 对 老 师 的 感 谢 之 情 ，而 已 经 毕 业 的 学 生 如 果 有 时 间 也 会 在 这 一 天 回 学 校 看 看 自 己 的 老 师 。
ဆရာများနေ့ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကျေးဇူးတင်စိတ်ကို ဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဆရာတွေဆီကို ပန်းစည်းတွေ ပို့ပေးကြပါတယ်၊ နောက်ပြီး ဘွဲ့ရကျောင်းသားတွေကလည်း တကယ်လို့ သူတို့မှာ အချိန်ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီနေ့မှာ ကျောင်းကို ပြန်လာကြပြီး မိမိတို့ရဲ့ ဆရာတွေကို တွေ့ဆုံကြပါတယ်။
那 为 什 么 教 师 节 是 在9月 10 日 呢 ？
ဒါဆိုရင် ဆရာများနေ့က ဘာကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ ဖြစ်နေရတာလဲ။
因 为 中 国 的 新 生 入 学 时 间 是 在9月 ，也 就 是 说 新 生 入 学 后 马 上 就 是 教 师 节 。
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ကျောင်းသားသစ်တွေ ကျောင်းစတက်တဲ့ အချိန်က စက်တင်ဘာလထဲမှာပါ၊ ကျောင်းစဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ဆရာများနေ့ ( ကျင်းပတာပါ ) လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
大 家 一 起 庆 祝 教 师 节 ，在 一 个 良 好 的 氛 围 中 ，可 以 让 学 生 更 懂 得 尊 敬 老 师 ，也 可 以 让 老 师 更 懂 得 自 己 的 职 责 ，更 努 力 地 去 教 好 学 生 。
ဆရာများနေ့ကို အားလုံးက အတူတကွ ဂုဏ်ပြုကြတယ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေတွေထဲမှာ ဆရာတွေအပေါ် ပိုပြီး ရိုသေလေးစားတတ်အောင် ကျောင်းသားတွေကို သင်ယူနိုင်စေတယ်၊ ဆရာတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို ပိုမိုနားလည်သွားစေပြီး၊ ကျောင်းသားတွေကို ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ သင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
1. 你们〔nǐmen〕မင်းတို့။ သင်တို့။ ခင်ဗျားတို့
2. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
3. 国家〔guójiā〕 နိုင်ငံ။ တိုင်းပြည်
6. 吗〔ma〕လား။ သလား
8. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
8. 每年〔měinián〕 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
10. 10日〔shírì〕၁၀ ရက်နေ့
11. 每 〔měi〕... တိုင်း
12. 到〔dào〕 ရောက်သည်
13. 这一天〔zhèyìtiān〕 ဒီတစ်နေ့
14. 学生们〔xuéshēngmen〕 ကျောင်းသားတွေ
15. 会〔huì〕... လိမ့်မယ်။ တတ်သည်
18. 给〔gěi〕 ပေးသည်
19. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
21. 表达〔biǎodá〕 ဖော်ပြသည်
22. 对〔duì〕... ကို။ အား
23. 感谢〔gǎnxiè〕 ကျေးဇူးတင်သည်
24. 之〔zhī〕ရဲ့။ ၏
25. 情〔qíng〕သံယောဇဉ်။ မေတ္တာ။ အခြေအနေ
26. 而〔ér〕 ပြီးနောက်
27. 已经〔yǐjīng〕... ပြီးနှင့်ပြီ
28. 毕业〔bìyè〕အတန်းအောင်သည်။ ဘွဲ့ရသည်
29. 学生〔xuéshēng〕 ကျောင်းသား
32. 也〔yě〕... လည်း။ လည်းပဲ
33. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
34. 回〔huí〕 ပြန်သည်
35. 学校〔xuéxiào〕 ကျောင်း
37. 那〔nà〕အဲဒါ။ ဒါ
41. 新生〔xīnshēng〕 ကျောင်းသားသစ်
42. 入学〔rùxué〕 ကျောင်းဝင်သည်။ ကျောင်းတက်သည်
44. 说〔shuō〕 ပြောသည်
45. 后〔hòu〕 ပြီးနောက်
46. 马上 〔mǎshàng〕ချက်ချင်း
50. 一个〔yíge〕တစ်ခု။ တစ်ယောက်
51. 良好〔liánghǎo〕 ကောင်းမွန်သည်
53. 中〔zhōng〕အလယ်။ ဗဟို
54. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်
55. 让〔ràng〕... စေသည်
58. 得〔de〕... တာ
59. 尊敬〔zūnjìng〕ကြည်ညိုလေးစားသည်။ ကော်ရော်သည်
62. 地〔de〕... စွာ။ နဲ့
65. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
ဘယျနိုငျငံ၊ ဘာလူမြိုးပဲဖွဈဖွဈ မိမိတို့ကို ပညာသငျကွားပေးတဲ့ ဆရာတှကေို ပူဇျောကနျတော့လရှေိ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ နိုငျငံတိုငျးမှာ ဆရာမြားနကေို့ ကငျြးပကွပါတယျ။
သငျတို့နိုငျငံမှာ ဆရာမြားနေ့ ရှိပါသလား။
တရုတျနိုငျငံမှာ ဆရာမြားနကေ့တော့ နှဈစဉျ စကျတငျဘာလ ၁၀ ရကျနပေ့ါ။
ဆရာမြားနေ့ ရောကျပွီဆိုတာနဲ့ ကြောငျးသားတှဟော သူတို့ရဲ့ ကြေးဇူးတငျစိတျကို ဖျောပွတဲ့အနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ဆရာတှဆေီကို ပနျးစညျးတှေ ပို့ပေးကွပါတယျ၊ နောကျပွီး ဘှဲ့ရကြောငျးသားတှကေလညျး တကယျလို့ သူတို့မှာ အခြိနျရှိတယျဆိုရငျ အဲဒီနမှေ့ာ ကြောငျးကို ပွနျလာကွပွီး မိမိတို့ရဲ့ ဆရာတှကေို တှဆေုံ့ကွပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ဆရာမြားနကေ့ ဘာကွောငျ့ စကျတငျဘာလ ၁၀ ရကျနေ့ ဖွဈနရေတာလဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တရုတျပွညျမှာ ကြောငျးသားသဈတှေ ကြောငျးစတကျတဲ့ အခြိနျက စကျတငျဘာလထဲမှာပါ၊ ကြောငျးစဖှငျ့ပွီးတာနဲ့ ခကျြခငျြးပဲ ဆရာမြားနေ့ ( ကငျြးပတာပါ ) လို့လညျး ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဆရာမြားနကေို့ အားလုံးက အတူတကှ ဂုဏျပွုကွတယျ၊ ကောငျးမှနျတဲ့ အခွအေနတှေထေဲမှာ ဆရာတှအေပျေါ ပိုပွီး ရိုသလေေးစားတတျအောငျ ကြောငျးသားတှကေို သငျယူနိုငျစတေယျ၊ ဆရာတှကေိုလညျး သူတို့ရဲ့ တာဝနျဝတ်တရားတှကေို ပိုမိုနားလညျသှားစပွေီး၊ ကြောငျးသားတှကေို ကွိုးကွိုးစားစားနဲ့ သငျပွပေးပါလိမျ့မယျ။
1. 你们〔nǐmen〕မငျးတို့။ သငျတို့။ ခငျဗြားတို့
2. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော
3. 国家〔guójiā〕 နိုငျငံ။ တိုငျးပွညျ
8. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
8. 每年〔měinián〕 နှဈစဉျနှဈတိုငျး
10. 10日〔shírì〕၁၀ ရကျနေ့
11. 每 〔měi〕... တိုငျး
12. 到〔dào〕 ရောကျသညျ
13. 这一天〔zhèyìtiān〕 ဒီတဈနေ့
14. 学生们〔xuéshēngmen〕 ကြောငျးသားတှေ
15. 会〔huì〕... လိမျ့မယျ။ တတျသညျ
18. 给〔gěi〕 ပေးသညျ
19. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
21. 表达〔biǎodá〕 ဖျောပွသညျ
23. 感谢〔gǎnxiè〕 ကြေးဇူးတငျသညျ
24. 之〔zhī〕ရဲ့။ ၏
25. 情〔qíng〕သံယောဇဉျ။ မတ်ေတာ။ အခွအေနေ
26. 而〔ér〕 ပွီးနောကျ
27. 已经〔yǐjīng〕... ပွီးနှငျ့ပွီ
28. 毕业〔bìyè〕အတနျးအောငျသညျ။ ဘှဲ့ရသညျ
29. 学生〔xuéshēng〕 ကြောငျးသား
32. 也〔yě〕... လညျး။ လညျးပဲ
33. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
34. 回〔huí〕 ပွနျသညျ
35. 学校〔xuéxiào〕 ကြောငျး
41. 新生〔xīnshēng〕 ကြောငျးသားသဈ
42. 入学〔rùxué〕 ကြောငျးဝငျသညျ။ ကြောငျးတကျသညျ
44. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
45. 后〔hòu〕 ပွီးနောကျ
46. 马上 〔mǎshàng〕ခကျြခငျြး
50. 一个〔yíge〕တဈခု။ တဈယောကျ
51. 良好〔liánghǎo〕 ကောငျးမှနျသညျ
53. 中〔zhōng〕အလယျ။ ဗဟို
54. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ
55. 让〔ràng〕... စသေညျ
59. 尊敬〔zūnjìng〕ကွညျညိုလေးစားသညျ။ ကျောရျောသညျ
62. 地〔de〕... စှာ။ နဲ့
65. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
8:44 PM C-Text , Chinese
အခုတလော လမ်းမပေါ်မှာ လူကြီး၊ လူငယ်တွေ စုရုံးစုရုံးနဲ့ ဘာလုပ်နေကြပါလိမ့်။ လက်စသတ်တော့ Pokémon Go ဂိမ်းကို ဆော့နေကြတာကိုး။
精 灵 宝 可 梦 Go 就 是 现 在 最 流 行 的 游 戏 Pokémon Go 啦 。
精灵宝可梦 Go ဆိုတာ အခု ခေတ်အစားဆုံးဖြစ်တဲ့ Pokémon Go ဆိုတဲ့ ဂိမ်းပဲပေါ့။
精 灵 宝 可 梦 Go 刚 一 上 线 ，就 风 靡 网 络 ，所 有 人 不 是 在 玩 ，就 是 在 说 这 个 游 戏 。
Pokémon Go ဟာ အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်လာတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ရေပန်းစားသွားတယ်၊ လူတွေဟာ မဆော့ကြရင်တောင်၊ ဒီဂိမ်းအကြောင်းကိုပဲ ပြောဆိုနေကြတယ်။
每 个 人 、大 街 小 巷 、每 时 每 刻 都 在 玩 这 个 游 戏 。
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လမ်းကြီးလမ်းငယ် အသွယ်သွယ်မှာ အချိန်တိုင်း နာရီတိုင်း ဒီဂိမ်းကိုပဲ ဆော့နေကြတော့တယ်။
很 多 人 觉 得 这 个 游 戏 不 仅 好 玩 ，而 且 还 有 益 健 康 。
ဒီဂိမ်းဟာ ဆော့လို့ကောင်းရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးရှိတယ်လို့ လူအများစုက ယူဆထားကြတယ်။
因 为 这 个 游 戏 要 玩 家 真 的 走 出 去 到 户 外 去 找 小 精 灵 ，为 了 找 到 你 想 要 的 小 精 灵 ，有 时 你 得 走 好 几 个 街 区 ，这 样 就 让 喜 欢 游 戏 的 宅 男 们 不 能 呆 在 家 里 ，想 要 抓 小 精 灵 就 只 得 出 门 啦 。
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဂိမ်းကစားသူတွေဟာ အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး မှင်စာလေးတွေကို ရှာရတယ်၊ သင်လိုချင်တဲ့ မှင်စာလေးတွေကို ရှာဖွေရရှိဖို့အတွက်၊ တခါတလေမှာ ဘလောက်လေးငါးခုလောက်ကို လမ်းလျှောက်ကြရတယ်၊ ဒီလိုမှသာ ဂိမ်းကို သဘောကျကြတဲ့ အိမ်တွင်းပုန်းလေးတွေဟာ အိမ်ထဲမှာ ကုပ်နေလို့ မရကြတော့ဘဲ၊ မှင်စာလေးတွေကို ဖမ်းချင်ပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်ပြင်ကို ထွက်ကိုထွက်ရတော့မှာပါ။
但 是 有 的 人 觉 得 这 个 游 戏 存 在 一 定 的 危 险 。
ဒါပေမယ့် ဒီဂိမ်းဟာ အန္တရာယ်တွေ သေချာပေါက် ရှိနိုင်တယ်လို့လည်း လူအများစုက ယူဆကြပါတယ်။
因 为 有 的 人 边 走 路 ，甚 至 边 开 车 都 在 玩 精 灵 宝 可 梦 Go ，不 注 意 看 路 ，很 容 易 发 生 交 通 事 故 。
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေဟာ လမ်းလျှောက်ရင်း၊ ပိုဆိုးတာက ကားမောင်းရင်း Pokémon Go ကို ဆော့ကြလို့ပဲ၊ လမ်းကို သတိထားပြီး မကြည့်ကြတော့၊ ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားဖို့ အရမ်း လွယ်နေတာပေါ့။
在 中 国 的 网 友 不 太 能 理 解 为 什 么 那 么 多 国 家 的 人 都 那 么 痴 迷 精 灵 宝 可 梦 Go , 为 什 么 呢 ？
နိုင်ငံတိုင်းက လူတွေဟာ Pokémon Go ကို ဘာလို့ ဒီလောက် အရူးအမူးဖြစ်နေကြလဲဆိုတာကို တရုတ်ပြည်က အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတွေက သိပ်နားမလည်နိုင်ကြဘူး၊ ဘာကြောင့်များလဲ။
因 为 这 个 游 戏 还 没 有 在 中 国 上 线 ，中 国 网 友 还 没 能 接 触 到 这 个 游 戏 ，自 然 就 不 能 理 解 它 的 魅 力 啦 。
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဂိမ်းဟာ တရုတ်ပြည်မှာ အွန်လိုင်းပေါ် မရောက်သေးတော့၊ တရုတ်ပြည်က အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတွေဟာ ဒီဂိမ်းကို ဆော့လို့ မရကြသေးပါဘူး၊ ဒီဂိမ်းရဲ့ ညှို့ယူဖမ်းစားမှုတွေကို သူ့အလိုလိုတော့ ဘယ်လိုလုပ် နားလည်နိုင်မှာလဲ။
不 过 现 在 已 经 有 很 多 中 国 网 友 手 痒 了 ，直 呼 ：“ 精 灵 宝 可 梦 Go 什 么 时 候 能 在 中 国 上 线 呀 ？我 也 想 抓 比 卡 丘 ！”
ဒါပေမယ့် တရုတ်ပြည်က အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ အများစုကတော့ အခု လက်ယားနေကြပြီ၊ Pokémon Go က တရုတ်ပြည်မှာ ဘယ်တော့ အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်မှာလဲ။ ငါလည်း Pikachu တွေကို ဖမ်းချင်တယ်ကွာ - လို့ အော်နေကြလေရဲ့။
1. 精灵宝可梦Go〔jīnglíng bǎokěmèng Go〕Pokémon Go
2. 就是〔jiùshì〕... ပဲပေါ့
4. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
5. 流行〔liúxíng〕 ရေပန်းစားသည်
10. 一...就〔yī...jiù〕... တာနဲ့ ... တပြိုင်နက်
11. 上线〔shàngxiàn〕အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်လာသည်
12. 风靡〔fēngmǐ〕 ရေပန်းစားသည်။ ခေတ်စားသည်
15. 不是...就是〔búshì...jiùshì〕... မဟုတ် ... သာ ဖြစ်သည်
16. 在〔zài〕... နေတုန်း။ နေဆဲ
17. 玩〔wán〕 ဆော့ကစားသည်
18. 说〔shuō〕 ပြောသည်
19. 这个〔zhège〕ဒီဟာ။ ဒီတစ်ခု
21. 大街小巷〔dàjiē xiǎoxiàng〕လမ်းကြီးလမ်းငယ်များ
22. 每时每刻〔měishí měikè〕နာရီနှင့်အမျှ မိနစ်နှင့်အမျှ
26. 不仅...而且〔bùjǐn...érqiě〕... မက ... နောက်ပြီး
27. 好玩〔hǎowán〕 ဆော့လို့ကောင်းသည်
28. 还〔hái〕... သေးသည်
32. 要〔yào〕... မယ်
36. 到〔dào〕 ရောက်သည်
41. 为了〔wèile〕... အတွက်
43. 你〔nǐ〕သင်။ မင်း။ ခင်ဗျား
46. 得〔děi〕... ရမယ်
48. 好几个〔hǎojǐge〕 လေးငါးခု
51. 让〔ràng〕... စေသည်
55. 能〔néng〕... နိုင်သည်
57. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်
60. 只〔zhǐ〕... သာလျှင်။ ပဲ
65. 存在〔cúnzài〕တည်ရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဘဝ
66. 一定〔yídìng〕 သေချာပေါက်။ မုချ
68. 边...边〔biān...biān〕... ယင်း ... ယင်း
70. 甚至〔shènzhì〕ထို့ထက်မက။ ပင်လျှင်
72. 注意〔zhùyì〕ဂရုစိုက်သည်။ သတိထားသည်
76. 发生〔fāshēng〕 ဖြစ်ပွားသည်
81. 不太〔bútài〕သိပ်မ ... ပါ
86. 国家〔guójiā〕 နိုင်ငံ။ တိုင်းပြည်
88. 痴迷〔chīmí〕 တွေဝေမိန်းမောသည်
90. 还没有〔háiméiyǒu〕မ ... ရသေးပါ
91. 还没能〔háiméinéng〕မ ... နိုင်သေးပါ
93. 自然〔zìrán〕... လိမ့်မည်သာ။ အလိုလို
94. 不能〔bùnéng〕မ ... နိုင်ပါ
96. 魅力〔mèilì〕 ညှို့ဓာတ်
98. 已经〔yǐjīng〕... ပြီးနှင့်ပြီ
102. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
103. 直〔zhí〕တည့်တည့်။ တောက်လျှောက်
104. 呼〔hū〕 အော်ဟစ်သည်။ ခေါ်သည်
105. 什么时候〔shénme shíhou〕ဘယ်တော့လဲ
107. 我〔wǒ〕ငါ။ ကျွန်တော်။ ကျွန်မ
108. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
109. 想〔xiǎng〕... ချင်သည်
Pokémon Go ဂိမျးဆော့ခွငျး။
အခုတလော လမျးမပျေါမှာ လူကွီး၊ လူငယျတှေ စုရုံးစုရုံးနဲ့ ဘာလုပျနကွေပါလိမျ့။ လကျစသတျတော့ Pokémon Go ဂိမျးကို ဆော့နကွေတာကိုး။
精灵宝可梦 Go ဆိုတာ အခု ခတျေအစားဆုံးဖွဈတဲ့ Pokémon Go ဆိုတဲ့ ဂိမျးပဲပေါ့။
Pokémon Go ဟာ အှနျလိုငျးပျေါ ရောကျလာတာနဲ့ ခကျြခငျြးပဲ ရပေနျးစားသှားတယျ၊ လူတှဟော မဆော့ကွရငျတောငျ၊ ဒီဂိမျးအကွောငျးကိုပဲ ပွောဆိုနကွေတယျ။
လူတိုငျးလူတိုငျးဟာ လမျးကွီးလမျးငယျ အသှယျသှယျမှာ အခြိနျတိုငျး နာရီတိုငျး ဒီဂိမျးကိုပဲ ဆော့နကွေတော့တယျ။
ဒီဂိမျးဟာ ဆော့လို့ကောငျးရုံသာမက ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး ကောငျးကြိုးရှိတယျလို့ လူအမြားစုက ယူဆထားကွတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဂိမျးကစားသူတှဟော အိမျပွငျထှကျပွီး မှငျစာလေးတှကေို ရှာရတယျ၊ သငျလိုခငျြတဲ့ မှငျစာလေးတှကေို ရှာဖှရေရှိဖို့အတှကျ၊ တခါတလမှော ဘလောကျလေးငါးခုလောကျကို လမျးလြှောကျကွရတယျ၊ ဒီလိုမှသာ ဂိမျးကို သဘောကကြွတဲ့ အိမျတှငျးပုနျးလေးတှဟော အိမျထဲမှာ ကုပျနလေို့ မရကွတော့ဘဲ၊ မှငျစာလေးတှကေို ဖမျးခငျြပွီဆိုတာနဲ့ အိမျပွငျကို ထှကျကိုထှကျရတော့မှာပါ။
ဒါပမေယျ့ ဒီဂိမျးဟာ အန်တရာယျတှေ သခြောပေါကျ ရှိနိုငျတယျလို့လညျး လူအမြားစုက ယူဆကွပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတှဟော လမျးလြှောကျရငျး၊ ပိုဆိုးတာက ကားမောငျးရငျး Pokémon Go ကို ဆော့ကွလို့ပဲ၊ လမျးကို သတိထားပွီး မကွညျ့ကွတော့၊ ယာဉျမတျောတဆမှု ဖွဈပှားဖို့ အရမျး လှယျနတောပေါ့။
နိုငျငံတိုငျးက လူတှဟော Pokémon Go ကို ဘာလို့ ဒီလောကျ အရူးအမူးဖွဈနကွေလဲဆိုတာကို တရုတျပွညျက အှနျလိုငျးမိတျဆှတှေကေ သိပျနားမလညျနိုငျကွဘူး၊ ဘာကွောငျ့မြားလဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဂိမျးဟာ တရုတျပွညျမှာ အှနျလိုငျးပျေါ မရောကျသေးတော့၊ တရုတျပွညျက အှနျလိုငျးမိတျဆှတှေဟော ဒီဂိမျးကို ဆော့လို့ မရကွသေးပါဘူး၊ ဒီဂိမျးရဲ့ ညှို့ယူဖမျးစားမှုတှကေို သူ့အလိုလိုတော့ ဘယျလိုလုပျ နားလညျနိုငျမှာလဲ။
ဒါပမေယျ့ တရုတျပွညျက အှနျလိုငျးမိတျဆှေ အမြားစုကတော့ အခု လကျယားနကွေပွီ၊ Pokémon Go က တရုတျပွညျမှာ ဘယျတော့ အှနျလိုငျးပျေါ ရောကျမှာလဲ။ ငါလညျး Pikachu တှကေို ဖမျးခငျြတယျကှာ - လို့ အျောနကွေလရေဲ့။
2. 就是〔jiùshì〕... ပဲပေါ့
4. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
5. 流行〔liúxíng〕 ရပေနျးစားသညျ
10. 一...就〔yī...jiù〕... တာနဲ့ ... တပွိုငျနကျ
11. 上线〔shàngxiàn〕အှနျလိုငျးပျေါ ရောကျလာသညျ
12. 风靡〔fēngmǐ〕 ရပေနျးစားသညျ။ ခတျေစားသညျ
15. 不是...就是〔búshì...jiùshì〕... မဟုတျ ... သာ ဖွဈသညျ
16. 在〔zài〕... နတေုနျး။ နဆေဲ
17. 玩〔wán〕 ဆော့ကစားသညျ
18. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
19. 这个〔zhège〕ဒီဟာ။ ဒီတဈခု
21. 大街小巷〔dàjiē xiǎoxiàng〕လမျးကွီးလမျးငယျမြား
22. 每时每刻〔měishí měikè〕နာရီနှငျ့အမြှ မိနဈနှငျ့အမြှ
26. 不仅...而且〔bùjǐn...érqiě〕... မက ... နောကျပွီး
27. 好玩〔hǎowán〕 ဆော့လို့ကောငျးသညျ
28. 还〔hái〕... သေးသညျ
32. 要〔yào〕... မယျ
36. 到〔dào〕 ရောကျသညျ
41. 为了〔wèile〕... အတှကျ
43. 你〔nǐ〕သငျ။ မငျး။ ခငျဗြား
46. 得〔děi〕... ရမယျ
48. 好几个〔hǎojǐge〕 လေးငါးခု
51. 让〔ràng〕... စသေညျ
55. 能〔néng〕... နိုငျသညျ
57. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသညျ
60. 只〔zhǐ〕... သာလြှငျ။ ပဲ
65. 存在〔cúnzài〕တညျရှိသညျ။ ရုပျပိုငျးဘဝ
66. 一定〔yídìng〕 သခြောပေါကျ။ မုခြ
68. 边...边〔biān...biān〕... ယငျး ... ယငျး
70. 甚至〔shènzhì〕ထို့ထကျမက။ ပငျလြှငျ
72. 注意〔zhùyì〕ဂရုစိုကျသညျ။ သတိထားသညျ
76. 发生〔fāshēng〕 ဖွဈပှားသညျ
81. 不太〔bútài〕သိပျမ ... ပါ
86. 国家〔guójiā〕 နိုငျငံ။ တိုငျးပွညျ
88. 痴迷〔chīmí〕 တှဝေမေိနျးမောသညျ
90. 还没有〔háiméiyǒu〕မ ... ရသေးပါ
91. 还没能〔háiméinéng〕မ ... နိုငျသေးပါ
93. 自然〔zìrán〕... လိမျ့မညျသာ။ အလိုလို
94. 不能〔bùnéng〕မ ... နိုငျပါ
96. 魅力〔mèilì〕 ညှို့ဓာတျ
98. 已经〔yǐjīng〕... ပွီးနှငျ့ပွီ
102. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
103. 直〔zhí〕တညျ့တညျ့။ တောကျလြှောကျ
104. 呼〔hū〕 အျောဟဈသညျ။ ချေါသညျ
105. 什么时候〔shénme shíhou〕ဘယျတော့လဲ
107. 我〔wǒ〕ငါ။ ကြှနျတျော။ ကြှနျမ
108. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
109. 想〔xiǎng〕... ခငျြသညျ